ဗုဒ္ဓတရားတော်များ: 3/1/09 - 4/1/09
သာရဏီယသုတ် - အောက်မေ့ဖွယ် နေရာ...
သာရဏီယသုတ် - (အောက်မေ့ဖွယ်)
ဦးထိပ်၌ အဘိသိက်သွန်းပြီးသော ရေမြေသနင်း ပြည့်ရှင်မင်းသည် ...
ဤအရပ် သုံးမျိုးတို့ကို အသက်ထက်ဆုံး အောက်မေ့အပ်ကုန်၏။
၁... ရဟန်းတို့ ...
ဦးထိပ်၌ အဘိသိက် သွန်းပြီးသော ရေမြေသနင်း ပြည့်ရှင်မင်းသည် အကြင် အရပ် ၌ ဖွားမြင်၏။ ရဟန်းတို့ ဤဖွားမြင်ရာအရပ်သည် ဦးထိပ်၌ အဘိသိက်သွန်းပြီး သော ရေမြေသနင်း ပြည့်ရှင်မင်း၏ အသက်ထက်ဆုံး အောက်မေ့အပ်သော ပဌမ အရပ်တည်း။
၂... ရဟန်းတို့ ...
နောက်တစ်မျိုးကား ဦးထိပ်၌ အဘိသိက်သွန်းပြီးသော ရေမြေသနင်း ပြည့်ရှင်မင်း သည် အကြင် အရပ်ဝယ် ဦးထိပ်၌ အဘိသိက်သွန်းအပ်၏။ ရဟန်းတို့ ဤအဘိ သိက် သွန်းလောင်းရာအရပ်သည် ဦးထိပ်၌ အဘိသိက်သွန်းပြီးသော ရေမြေသ နင်း ပြည့်ရှင်မင်း၏ အသက်ထက်ဆုံး အောက်မေ့အပ်သော ဒုတိယအရပ်တည်း။
၃... ရဟန်းတို့ ...
နောက်တစ်မျိုးကား ဦးထိပ်၌ အဘိသိက်သွန်းပြီးသော ရေမြေသနင်း ပြည့်ရှင်မင်း သည် အကြင် အရပ်၌ စစ်အောင်သောကြောင့် အောင်ပြီးသော စစ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ထို စစ်မြေအရပ်ကို အုပ်ချုပ်၍ နေ၏။ ရဟန်းတို့ ထို စစ်အောင်မြင်ရာ အရပ်သည် ဦးထိပ်၌ အဘိသိက်သွန်းပြီးသော ရေမြေသနင်း ပြည့်ရှင်မင်း၏ အသက်ထက်ဆုံး အောက်မေ့အပ်သော တတိယအရပ်တည်း။
ဦးထိပ်၌ အဘိသိက် သွန်းပြီးသော ရေမြေသနင်း ပြည့်ရှင်မင်းသည် ...
ဤအရပ် သုံးမျိုးတို့ကို အသက်ထက်ဆုံး အောက်မေ့ အပ်ကုန်၏။
ရဟန်းသည် ဤအရပ်သုံးမျိုးတို့ကို အသက်ထက်ဆုံး အောက်မေ့အပ်ကုန်၏။
ရဟန်းတို့ ရဟန်းသည် အကြင် အရပ်၌ ဆံမုတ်ဆိတ်ကိုပယ်၍ ဖန်ရည်ဆိုးသော အဝတ်တို့ကို ဝတ်ရုံပြီးလျှင် လူ့ဘောင်မှ ရဟန်းဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ရဟန်းပြု၏။ ရဟန်းတို့ ဤရဟန်းပြုရာအရပ်သည် ရဟန်း၏ အသက်ထက်ဆုံး အောက်မေ့အပ် သော ပဌမအရပ်တည်း။
ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား ရဟန်းသည် အကြင်အရပ်၌'ဤတရားကား ဆင်းရဲ' ဟု ဟုတ်မှန်သော အတိုင်းသိ၏၊ ''ဤတရားကား ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း''ဟု ဟုတ်မှန် သော အတိုင်း သိ၏၊ ''ဤတရားကား ဆင်းရဲချုပ်ရာ'' ဟု ဟုတ်မှန်သော အတိုင်း သိ၏၊ ''ဤတရားကား ဆင်းရဲ ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်'' ဟု ဟုတ်မှန် သော အတိုင်း သိ၏၊ ရဟန်းတို့ ဤသစ္စာ လေးပါးကို ဟုတ်မှန်သော အတိုင်း သိရာအရပ်သည် ရဟန်း၏ အသက်ထက်ဆုံး အောက်မေ့အပ်သော ဒုတိယအရပ် တည်း။
ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား ရဟန်းသည် အကြင် အရပ်၌ အာသဝေါတို့၏ ကုန်ခန်းခြင်းကြောင့် အာသဝေါ မရှိသော၊ စိတ်၏ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက် သော အရဟတ္တဖိုလ်သမာဓိနှင့် ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သော အရဟတ္တဖိုလ် ပညာကို မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ကိုယ်တိုင် ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် မျက်မှောက် ပြု လျက် ရောက်၍ နေ၏။ ရဟန်းတို့ ဤအရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ရာအရပ်သည် ရဟန်း၏ အသက်ထက်ဆုံး အောက်မေ့အပ်သော တတိယအရပ်တည်း။
ရဟန်းသည် အသက် ထက်ဆုံး အောက်မေ့အပ်ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။၁၂
၂ - သာရဏီယသုတ်၊ ရထကာရ၀ဂ်၊ တိကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/31/2009 06:09:00 PM Links to this post
ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ကို ထိလျက် တည်ရာ၏...
ထိုအရာကို မည်သို့ မှတ်ထင်ကြကုန် သနည်း...
ခွန်အားရှိသော ယောက်ျားသည် မြဲမြံခိုင်ခံ့သော သားမြီးကြိုးဖြင့် ခြေသလုံးနှစ်ဖက် တို့ကို ရစ်ပတ်၍ ပွတ်တိုက်ရာ၏၊ ထိုသားမြီး ကြိုးသည် အပေါ်အရေကို ဖြတ်ရာ၏၊ အပေါ်အရေကို ဖြတ်ပြီးလျှင် အတွင်းအရေကို ဖြတ်ရာ၏၊ အတွင်းအရေကို ဖြတ် ပြီးလျှင် အသားကို ဖြတ်ရာ၏၊ အသားကို ဖြတ်ပြီးလျှင် အကြောကို ဖြတ်ရာ၏၊ အကြောကို ဖြတ်ပြီးလျှင် အရိုးကို ဖြတ်ရာ၏၊ အရိုးကို ဖြတ်ပြီးလျှင် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ကို ထိလျက် တည်ရာ၏၊
မင်းမျိုး၌ဖြစ်၍ များသော ဥစ္စာနှစ်ရှိကုန်သော သူတို့၏သော်လည်းကောင်း၊ ပုဏ္ဏား မျိုး၌ဖြစ်၍ များသော ဥစ္စာနှစ်ရှိကုန်သော သူတို့၏သော်လည်းကောင်း၊ သူကြွယ် မျိုး၌ဖြစ်၍ များသော ဥစ္စာနှစ်ရှိကုန်သော သူတို့၏သော်လည်းကောင်း ရှိခိုးခြင်းကို သာယာရာ၏။ ထိုနှစ်မျိုးတို့တွင် အဘယ်အရာသည် မြတ်သနည်း ဟု မေးတော် မူ၏။
မင်းမျိုး၌ဖြစ်၍ များသောဥစ္စာနှစ်ရှိကုန်သော သူတို့၏သော် လည်းကောင်း ပုဏ္ဏား မျိုး၌ ဖြစ်၍ များသော ဥစ္စာနှစ်ရှိကုန်သော သူတို့၏သော် လည်းကောင်း၊ သူကြွယ် မျိုး၌ ဖြစ်၍ များသော ဥစ္စာ နှစ်ရှိကုန်သော သူတို့၏သော် လည်းကောင်း ရှိခိုးခြင်း ကို သာယာခြင်းသည်သာလျှင် မြတ်ပါ၏၊
အသျှင်ဘုရား ခွန်အားရှိသော ယောက်ျားသည် မြဲမြံခိုင်ခံ့သော သားမြီးကြိုးဖြင့်။ပ။ ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီကို ထိ၍ တည်ခြင်းသည် ဆင်းရဲလှပါ၏ ဟု လျှောက်ကြကုန်၏။
သင်တို့အား ငါဟောကြားအံ့၊ သိစေအံ့။ ယုတ်ညံ့သော သဘောရှိသော၊ မစင်မ ကြယ် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် အကျင့်ရှိသော၊ ဖုံးလွှမ်းအပ်သော မကောင်းမှုရှိသော၊ ရဟန်းမဟုတ်ဘဲလျက် ငါရဟန်းဟုဝန်ခံသော၊ မြတ်သောအကျင့်ကို မကျင့်ဘဲ လျက် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သည်ဟု ဝန်ခံသော၊ အတွင်း၌ ကိလေသာ တို့ဖြင့် ပုပ်သော၊ ကိလေသာတို့ဖြင့် စိုစွတ်သော၊ ယောက်သွားပုပ်နှင့် တူသော သဘောရှိသော ထိုဒုဿီလ ပုဂ္ဂိုလ်အား ခွန်အားရှိသော ယောက်ျားသည် မြဲမြံခိုင် ခံ့သော သားမြီးကြိုးဖြင့် ခြေသလုံးနှစ်ဖက်တို့ကို ရစ်ပတ်၍။ ပွတ်တိုက်ရာ၏၊ ထို သားမြီးကြိုးသည် အပေါ်အရေကို ဖြတ်ရာ၏၊ အပေါ်အရေကို ဖြတ်ပြီးလျှင် အတွင်းအရေကို ဖြတ်ရာ၏၊ အတွင်းအရေကို ဖြတ်ပြီးလျှင် အသားကို ဖြတ်ရာ၏၊ အသားကို ဖြတ်ပြီးလျှင် အကြောကို ဖြတ်ရာ၏၊ အကြောကို ဖြတ်ပြီးလျှင် အရိုးကို ဖြတ်ရာ၏၊ အရိုးကို ဖြတ်ပြီးလျှင် ရိုးတွင်းချဉ်ဆီကို ထိလျက် တည်ရာ၏...၊
ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီကို ထိ၍ တည်ခြင်းသည်သာလျှင် မြတ်၏။
ထိုသားမြီးကြိုးဖြင့် ခြေသလုံးကို ပွတ်တိုက်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ထို ရဟန်းသည် သေခြင်းသို့မူလည်း ရောက်ရာ၏၊ သေလောက်သော ဆင်းရဲဒုက္ခသို့ မူလည်း ရောက်ရာ၏၊ ထိုသားမြီးကြိုးဖြင့် ခြေသလုံးကို ပွတ်တိုက်ခြင်းတည်းဟူ သော အကြောင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှနောက်၌ ချမ်းသာ ကင်းသော မကောင်းသောလားရာ ပျက်စီး၍ကျရောက်ရာ ငရဲသို့ကား မကျ ရောက်ရာ။
ရဟန်းတို့ သီလ မရှိကုန်သော ။ပ။ ယောက်သွားပုပ်နှင့် တူသော သဘောရှိသော ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား မင်းမျိုး၌ ဖြစ်၍ များသောဥစ္စာ အနှစ်ရှိကုန်သော သူတို့၏သော် လည်းကောင်း၊ ပုဏ္ဏားမျိုး၌ ဖြစ်၍ များသောဥစ္စာ အနှစ်ရှိကုန်သော သူတို့၏သော် လည်းကောင်း၊ သူကြွယ်မျိုး၌ ဖြစ်၍ များသောဥစ္စာ အနှစ်ရှိကုန်သော သူတို့၏ သော် လည်းကောင်း ရှိခိုးခြင်းကို သာယာခြင်းသည် ကာလ ကြာမြင့်စွာ စီးပွါးမဲ့ရန် ဆင်းရဲရန် ဖြစ်၏၊ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှနောက်၌ ချမ်းသာကင်းသော မကောင်းသော လားရာ ပျက်စီး၍ ကျရောက်ရာ ငရဲသို့ ကျရောက်ရ၏။ (၂)
၈ - အဂ္ဂိက္ခန္ဓောပမသုတ်-မှ၊ မဟာဝဂ်၊ သတ္တကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။၇၂
Posted by U Lawkanartha at 3/31/2009 05:57:00 PM Links to this post
အခိုးအလျှံနှင့်တကွ မီးပုံ ဥပမာ...
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် များစွာသော ရဟန်းသံဃာနှင့်အတူ ကောသ လတိုင်းတို့၌ ဒေသစာရီ ကြွတော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ဒေသစာရီ ကြွသွား တော်မူသည်ရှိသော် တစ်ခုသော အရပ်၌ တပြောင်ပြောင် တောက်လောင်လျက် အခိုးအလျှံနှင့်တကွ မီးတောက်နှင့် တကွ ဖြစ်သော မီးပုံကြီးကို မြင်တော်မူ၍ လမ်း ခရီးမှ ဖဲပြီးလျှင် သစ်ပင်ရင်းဝယ် ခင်းထားသော နေရာ၌ ထိုင်တော်မူလျက် ရဟန်း တို့ကို -
သင်တို့သည် တပြောင်ပြောင် တောက်လောင်လျက် အခိုးအလျှံနှင့်တကွ မီး တောက် နှင့်တကွ ဖြစ်သော ဤမီးပုံကြီးကို မြင်ကြကုန်၏လော ဟု မေးတော်မူ၏။
အသျှင်ဘုရား မြင်ကြပါကုန်၏ ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။
ထိုအရာကို မည်သို့ မှတ်ထင်ကြကုန်သနည်း၊
တပြောင်ပြောင် တောက်လောင်လျက် အခိုးအလျှံနှင့်တကွ မီးတောက်နှင့်တကွ ဖြစ်သော ဤမီးပုံကြီးကို ဖက်ပြီးလျှင် မှီ၍မူလည်း ထိုင်နေရာ၏၊ အနီးသို့မူလည်း ကပ်၍ အိပ်ရာ၏၊
နူးညံ့နုနယ်သော လက်ခြေရှိသော မင်းမျိုး သတို့သမီးကိုသော် လည်းကောင်း၊ ပုဏ္ဏားမျိုး သတို့သမီးကိုသော် လည်းကောင်း၊ သူဌေးမျိုး သတို့သမီးကိုသော် လည်းကောင်း လည်ကိုဖက်၍ အနီး၌မူလည်း ထိုင်နေရာ၏၊ အနီး၌မူလည်း ကပ်၍ အိပ်ရာ၏၊
(ထိုနှစ်မျိုးတို့တွင်) အဘယ်အရာသည် မြတ်လေသနည်း ဟု (မေးတော်မူ၏)။
နူးညံ့နုနယ်သော လက်ခြေရှိသော မင်းမျိုး သတို့သမီးကိုသော် လည်းကောင်း၊
ပုဏ္ဏားမျိုး သတို့သမီးကိုသော် လည်းကောင်း၊ သူဌေးမျိုး သတို့သမီးကိုသော် လည်းကောင်း ဖက်၍ အနီး၌ထိုင်နေခြင်း၊ အနီးသို့ကပ်၍ အိပ်ခြင်းသည်သာလျှင် မြတ်လှပါ၏၊
တပြောင်ပြောင် တောက်လောင်လျက် အခိုးအလျှံနှင့်တကွ မီးတောက်နှင့်တကွ ဖြစ်သော မီးပုံကြီးကိုဖက်၍ အနီး၌ ထိုင်နေခြင်း၊ အနီးသို့ ကပ်၍ အိပ်ခြင်းသည် ဆင်းရဲလှပါ၏ ဟု (လျှောက်ကြကုန်၏)။
ရဟန်းတို့ သင်တို့အား ငါဟောကြားအံ့ သိစေအ့၊ံ ယုတ်ညံ့သော သဘောရှိသော၊ မစင် မကြယ် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် အကျင့်ရှိသော၊ ဖုံးလွှမ်းအပ်သော မကောင်းမှု ရှိ သော၊ ရဟန်းမဟုတ်ဘဲလျက် ငါရဟန်းဟုဝန်ခံသော၊ မြတ်သောအကျင့်ကို မကျင့် ဘဲလျက် မြတ်သော အကျင့်ကို ကျင့်သည်ဟု ဝန်ခံသော၊ အတွင်း၌ (ကိလေသာ တို့ဖြင့်) ပုပ်သော၊ (ကိလေသာတို့ဖြင့်) စိုစွတ်သော၊ ယောက်သွားပုပ်နှင့်တူသော သဘောရှိသော ထိုဒုဿီလပုဂ္ဂိုလ်အား တပြောင်ပြောင် တောက်လောင်လျက် အခိုးအလျှံနှင့်တကွ မီးတောက်နှင့်တကွ ဖြစ်သော မီးပုံကြီးကို ဖက်၍ အနီး၌ ထိုင် နေခြင်း၊ အနီးသို့ ကပ်၍ အိပ်ခြင်းကသာလျှင် မြတ်၏။
ရဟန်းတို့ ထိုရဟန်းသည် ထိုမီးပုံကြီးကို ဖက်၍ အနီး၌ ထိုင်နေခြင်း၊ အနီးသို့ ကပ်၍ အိပ်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် သေခြင်းသို့မူလည်း ရောက်ရာ၏၊ သေလောက်သော ဆင်းရဲဒုက္ခသို့မူလည်း ရောက်ရာ၏၊ ထိုမီးပုံကြီးကို ဖက်၍ အနီး၌ ထိုင်နေခြင်း၊ အနီးသို့ကပ်၍ အိပ်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ခန္ဓာ ကိုယ်ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှနောက်၌ ချမ်းသာကင်းသော မကောင်းသောလား ရာ ပျက်စီး၍ ကျရောက်ရာ ငရဲသို့ကား မကျရောက်ရာ။ ရဟန်း တို့ ယုတ်ညံ့သော သဘောရှိ၍ မစင်ကြယ်သော၊ စက်ဆုပ် ရွံရှာအပ်သော အကျင့်ရှိသော။ပ။
(ကိလေသာတို့ဖြင့်) စိုစွတ်သော၊ ယောက်သွားပုပ်နှင့် တူသော သဘောရှိသော ထိုဒုဿီလပုဂ္ဂိုလ်အား နူးညံ့နုနယ်သော လက်ခြေရှိသော မင်းမျိုး သတို့သမီးကို သော် လည်းကောင်း၊ ပုဏ္ဏားမျိုး သတို့သမီးကိုသော် လည်းကောင်း၊ သူဌေးမျိုး သတို့သမီးကိုသော် လည်းကောင်း ဖက်၍ အနီး၌ ထိုင်နေခြင်း၊ အနီးသို့ ကပ်၍ အိပ်ခြင်းသည် ကာလကြာမြင့်စွာ စီးပွားမဲ့ရန် ဆင်းရဲရန် ဖြစ်၏၊ ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ချမ်းသာကင်းသော မကောင်းသော လားရာ ပျက်စီး၍ ကျရောက်ရာ ငရဲသို့ ကျရောက်ရ၏။ (၁)
Posted by U Lawkanartha at 3/30/2009 07:56:00 PM Links to this post
Posted by U Lawkanartha at 3/30/2009 07:58:00 AM Links to this post
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို မကြောက်ကြလင့်၊ ရဟန်းတို့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ ဟူ သော အမည်သည် ချမ်းသာသုခ၏ အမည်တည်း။
ငါသည် ကြာမြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး ပြုလုပ် ဆည်းပူးထား အပ်ကုန်သော ကောင်းမှုတို့၏ အလိုရှိဖွယ် နှစ်လိုဖွယ် မြတ်နိုးဖွယ်သော အကျိုးထူးကို ကြာမြင့် စွာသော ကာလပတ်လုံး ခံစားဖူးသည့် အဖြစ်ကို သိ၏၊ ခုနစ်နှစ်တို့ ပတ်လုံး မေတ္တာနှင့် ယှဉ်သော ဈာန်စိတ်ကို ပွါးဖူးပြီ၊ ခုနစ်နှစ်တို့ ပတ်လုံး မေတ္တာနှင့်ယှဉ် သော စိတ်ကို ပွါးစေ၍ ခုနစ်ခုသော သံဝဋ္ဋကပ် ဝိဝဋ္ဋကပ်တို့ပတ်လုံး ဤလူ့ပြည်သို့ တစ်ဖန် မလာပြီ၊ ရဟန်းတို့ သြကာသလောက ပျက်သည် ရှိသော် ငါသည် အာဘဿရဘုံသို့ ကပ်ရောက်ရ၏၊ သြကာသလောက တည်ပြန်သည် ရှိသော် ဆိတ်သုဉ်းသော (ပဌမဈာန်) ဗြဟ္မာ့ဗိမာန်၌ ဖြစ်၏။
ထိုပဌမဈာန် ဗြဟ္မာ့ဗိမာန်၌ ငါသည် ဗြဟ္မာဖြစ်၏။ မဟာဗြဟ္မာဖြစ်၏၊ လွှမ်းမိုးနိုင် သူဖြစ်၏၊ မည်သူကမျှ မလွှမ်းနိုင်သူ ဖြစ်၏၊ စင်စစ် (အလုံးစုံကို) မြင်သူဖြစ်၏၊ အလိုအတိုင်း ဖြစ်စေနိုင်သူ ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ငါသည် နတ်တို့ကို အစိုးရသော သိကြားမင်း သုံးဆယ့်ခြောက်ကြိမ် ဖြစ်ဖူး၏၊ အကြိမ်တစ်ရာမက တရားစောင့် သော တရားနှင့်အညီ မင်းပြုသော သမုဒ္ဒရာလေးစင်း အပိုင်းအခြားရှိသည့် လေး ကျွန်းလုံးကို အစိုးရသော ရန်အပေါင်းကို အောင်မြင်သော တိုင်းနိုင်ငံကို တည်ငြိမ် စေသော ရတနာ ခုနစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော စကြဝတေးမင်း ဖြစ်ခဲ့၏၊ ရဟန်းတို့ထို (စကြဝတေးမင်းဖြစ်သော) ငါ့အား ဤရတနာ ခုနစ်ပါးတို့သည် ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏။
ဤသည်ကား အဘယ်နည်း ...
စကြာရတနာ, ဆင်ရတနာ, မြင်းရတနာ, ပတ္တမြားရတနာ, မိဖုရားရတနာ, သူဌေး ရတနာ, ခုနစ်ခုမြောက် သားကြီး ရတနာတို့တည်း၊ ထို(စကြဝတေးမင်းဖြစ်သော ငါ့အား) ရဲရင့်သော သူရဲကောင်းအင်္ဂါရုပ်ရှိသော တစ်ဖက်စစ်သည်တို့ကို နှိမ်နင်း နိုင်သော အထောင်မကသော သားတော်တို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုငါသည် သမုဒ္ဒရာ အဆုံး ရှိသော ဤမြေကို တုတ်မဆောင်မူ၍ လက်နက်မဆောင် မူ၍ တရားသဖြင့် အောင်မြင်လျက် အုပ်စိုးခဲ့ပြီ ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
ချမ်းသာကို ရှာမှီးကြကုန်သောသူတော်ကောင်းတို့ ...
ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏ အကျိုး ကို ရှုကြလော့ ...။
ခုနစ်နှစ်တို့ ပတ်လုံး မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများ၍ သံဝဋ္ဋကပ် ဝိဝဋ္ဋကပ် ခုနစ်ခုတို့ ပတ် လုံး ဤလူ့လောကသို့ တစ်ဖန် မလာပြီ။ သြကာသလောက ပျက်သည်ရှိသော် အာဘဿရဘုံသို့ ကပ်ရောက်၍ဖြစ်ရ၏။ လောကသည် အသစ်တစ်ဖန် တည်ပြန် လတ်သော် ဆိတ်သုဉ်းသော ပဌမဈာန် ဗြဟ္မာ့ဘုံ၌ ဖြစ်၏။ ထိုအခါ၌ မိမိအလိုသို့ သူတစ်ပါးကို လိုက်စေနိုင်သော မဟာဗြဟ္မာ ခုနစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖူး၏။ နတ်တို့ကို အစိုးရ သော သိကြားမင်း သုံးဆယ့်ခြောက် ကြိမ်ဖြစ်၍ နတ်တို့၏ မင်းအဖြစ်ကို ပြုဖူး၏၊ ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်း အပြင်ကို အစိုးရသော စကြာမင်း ဖြစ်ဖူး၏။ ဦးထိပ်၌ အဘိသိက် သွန်းအပ်သော မြေကို အစိုးရသော လူတို့၏ အကြီးအမှူး ဖြစ်သော မင်းဖြစ်ဖူး၏၊ တုတ်မဆောင် လက်နက်မဆောင်ဘဲ ဤမြေပြင်ကို အောင်နိုင်၏။ (ငါသည်) ဤ မြေပြင်၌ တရားနှင့်အညီ မင်းပြု၍ နိုင့်ထက်မှု မပြုဘဲ တရားနှင့်ညီစွာ ဆုံးမခဲ့ပြီ။ ငါသည် ကာမဂုဏ် အလုံးစုံတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ ရတနာ ခုနစ်ပါးတို့နှင့် လည်း ကောင်း ပြည့်စုံသော များသောဥစ္စာများသော အသုံးအဆောင်ရှိသော ကြွယ်ဝ သော အမျိုး၌ ဖြစ်ဖူးပြီ။
လူတို့ကို ချီးမြှောက် ထောက်ပံ့တတ်ကုန်သော မြတ်စွာဘုရားတို့ ရှိကုန်၏၊ ထို ဘုရားရှင်တို့သည်လည်း ဤကောင်းမှုသည် ကြီးမားသော အကျိုး၏ အကြောင်း ပင်တည်း၊ ငါ၏ မြေ အပြင်ကို အစိုးရသော မင်းအဖြစ်သည် မပျက်စီး၊ များပြားလှ သောအသုံးအဆောင် အဆောက်အဦ ရှိသော အရှိန်အစော် ကြီးမားသော မင်း ဖြစ်၏၊ ဇမ္ဗ္ပူဒိပ်မြေအပြင်ကို အစိုးရသော တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံသော အခြံအရံနှင့် ပြည့် စုံသော မင်းဖြစ်၏ဟု ဤတရားကို ကောင်းစွာဟောကြားတော် မူအပ်၏။ ဤ တရားကို ကြားနာရသည်ရှိသော် အဘယ်သူသည် မကြည်ညိုဘဲ ရှိနိုင်ရာအံ့နည်း၊ မည်းညစ်သော သဘောရှိသော သူသော်မှလည်း ကြည်ညိုလေရာ၏၊ ထို့ကြောင့် အကျိုးစီးပွါးကို အလိုရှိသူသည် ကြီးမားသော အကျိုးကို အလိုရှိသည် ဖြစ်၍ ဘုရားရှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ကို အောက်မေ့လျက် သူတော်ကောင်း တရားကို အလေးအမြတ် ပြုအပ်၏။ ၆၂
၉ - မေတ္တသုတ်၊ အဗျာကတ၀ဂ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်၊
Posted by U Lawkanartha at 3/30/2009 07:34:00 AM Links to this post
ငြိမ်းအေးသော နိဗ္ဗာန်သို့ ဉာဏ်ဖြင့် သက်ဝင်၍ (နေလိုသော) အကျိုးစီးပွါး၌ လိမ္မာ သောသူသည် (ဤဆိုလတ္တံ့သော စည်းကမ်းနည်းလမ်းကို) ပြုကျင့်အပ်၏-
ကျင့်စွမ်းနိုင်ရမည်၊ ကိုယ် နှုတ်ဖြောင့်မတ်ရမည်၊ စိတ်နေ စိတ်ထား ကောင်းစွာ ဖြောင့်မတ်ရမည်၊ ဆိုဆုံးမ လွယ်ရမည်၊ စိတ်ထား နူးညံ့သိမ်မွေ့ရမည်၊ လွန်ကဲ မြင့်မောက်သော မာနမရှိရာ။
ပစ္စည်းလေးပါး၌ ရောင့်ရဲလွယ်ရမည်၊ မွေးမြူလွယ်ရမည်၊ အမှုကိစ္စ နည်းပါးရမည်၊ ဝန်ကျဉ်းပေါ့ပါးသော အသက်မွေးမှု ရှိရမည်၊ ငြိမ်သက်သော ဣနြေ္ဒရှိရမည်၊ ရင့် ကျက်သော ပညာရှိရမည်၊ ကိုယ်နှုတ်နှလုံး ကြမ်းတမ်းခြင်း မရှိရာ၊ ဒါယကာတို့၌ တပ်မက်မှု ကင်းရမည်။
ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့ စွပ်စွဲနိုင်မည့် ဒုစရိုက်ကို စိုးစဉ်း အနည်းငယ်မျှလည်း မပြုကျင့်ရာ၊
(ဤစည်းကမ်းနည်းလမ်းကို လိုက်နာရမည်)။ ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့သည် ချမ်းသာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကုန်သည် ဘေးကင်းကုန်သည်ဖြစ်၍ ချမ်းသာသော ကိုယ် စိတ် ရှိကြပါစေကုန်သတည်း။
ကြွင်းမဲ့ဥဿုံ အလုံးစုံကုန်သော (ထွက်သက်ဝင်သက်ရှိ) သတ္တဝါ (ထွက်သက် ဝင် သက်မဲ့) သတ္တဝါတို့သည် လည်းကောင်း, ထိတ်လန့်တတ်သော (ပုထုဇဉ်) ပုဂ္ဂိုလ် တို့သည် လည်းကောင်း, စိတ်ဓာတ် ခိုင်ခံ့သော (ရဟန္တာ) ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် လည်း ကောင်း, ရှည်သော (ကိုယ်ရှိသော) သတ္တဝါတို့သည် လည်းကောင်း, ကြီးသော (ကိုယ်ရှိသော) သတ္တဝါတို့သည်လည်းကောင်း, အလတ်စား ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါ တို့သည် လည်းကောင်း, ပုတိုသော ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါတို့သည် လည်းကောင်း, သေးဖွဲ သိမ်မွေ့သော ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါတို့သည် လည်းကောင်း, ဆူဖြိုးသော ကိုယ်ရှိသော သတ္တဝါတို့သည် လည်းကောင်း။
မြင်ဖူးသော သတ္တဝါတို့သည် လည်းကောင်း၊ မမြင်ဖူးသော သတ္တဝါတို့သည် လည်း ကောင်း၊ အဝေး၌နေသော သတ္တဝါတို့သည် လည်းကောင်း၊ အနီး၌နေသော သတ္တဝါတို့သည် လည်းကောင်း၊ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် လည်းကောင်း၊ ပုထုဇဉ် သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် လည်းကောင်း ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါတို့သည် ချမ်းသာ သော ကိုယ်စိတ် ရှိကြပါစေကုန် သတည်း။
တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို အမျက်မထွက်ပါစေလင့်၊ တစ်စုံတစ်ခုသော အရာ၌ တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ ခြုတ်ခြယ်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ရန်လိုသော စိတ်ဖြင့် လည်းကောင်း မထေမဲ့မြင် မပြုပါစေလင့်၊ အချင်းချင်း ဆင်းရဲမှုကို အလို မရှိပါစေလင့်။
မိခင်သည် ရင်၌ဖြစ်သော တစ်ဦးတည်းသားကို အသက်ရှင်စေရန် အစဉ် စောင့် ရှောက်ဘိသကဲ့သို့ ဤအတူပင် သတ္တဝါခပ်သိမ်းတို့၌ အတိုင်းအရှည် မရှိသော မေတ္တာစိတ်ကို ပွါးများရာ၏။
အထက် (ဘဝဂ်) အောက် (အဝီစိ) ဖီလာ အလုံးစုံသော လောက၌ ကျဉ်းမြောင်း ခြင်း မရှိသော အတွင်းရန် အပြင်ရန် ကင်းသော အတိုင်းအရှည် မရှိသော မေတ္တာ စိတ်ကို ပွါးများရာ၏။
ငိုက်မျည်းခြင်း ကင်း၍ ရပ်နေသမျှ သွားနေသမျှ ထိုင်နေသမျှ လျောင်းနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဤ(မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော) သတိကို ပွါးများအံ့ဟု ဆောက်တည်ရာ ၏။ ဤသာသနာတော်၌ မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော သတိဖြင့် နေခြင်းကို မြတ်သော နေခြင်း 'ဗြဟ္မဝိဟာရ' ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားတို့ ဟောတော်မူ ကုန်၏။
ထိုမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းသောသူသည် သက္ကာယဒိဋ္ဌိသို့လည်း မကပ်မူ၍ လော ကုတ္တရာ သီလရှိသည် ဖြစ်လျက် သောတာပတ္တိမဂ်ဉာဏ် အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသည် ဖြစ်၍ ဝတ္ထုကာမတို့၌ တပ်မက် တွယ်တာမှုကို ပယ်ဖျောက်သည် ရှိသော် အမိဝမ်း ၌ တစ်ဖန် (ပဋိသန္ဓေ) နေခြင်းသို့ မရောက်တော့ပေ ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၉ - မေတ္တသုတ်၊ ခုဒ္ဒကပါဌပါဠိတော်။
Posted by U Lawkanartha at 3/30/2009 07:32:00 AM Links to this post
ဤသုံးပါးသည် စိတ်၏ ရန်သူ ...
ရဟန်းတို့ ဤသုံးပါးတို့သည် ...
စိတ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သားတို့ ဖြစ်ကုန်၏၊
ရဟန်းတို့ လောဘသည် ...
စိတ်၏ အညစ်အကြေး၊ စိတ်၏ မိတ်ဆွေပျက်၊ စိတ်၏ ရန်သူ၊ စိတ်၏ သူသတ် သမား၊ စိတ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သား ဖြစ်၏၊
ရဟန်းတို့ ဒေါသသည် ...
ရဟန်းတို့ မောဟသည် ...
ရဟန်းတို့ ဤသုံးပါးတို့သည် စိတ်၏ အညစ်အကြေး စိတ်၏ မိတ်ဆွေပျက် စိတ်၏
ရန်သူ စိတ်၏ သူသတ်သမား စိတ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်သား ဖြစ်၏၊ ဤအနက် သဘောကို မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏၊
ထိုသုတ် ၌ ဤအနက်သဘောကို -
အကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်၏၊ လောဘသည် စိတ်ကိုချောက်ချားစေတတ်၏၊ အတွင်း စိတ်၌ ဖြစ်သော ထိုလောဘဟူသော ဘေးကို လူအပေါင်းသည် မသိနိုင်။ တပ် မက်သောသူသည် အကျိုးကိုမသိ၊ တပ်မက်သောသူသည် တရားကိုမမြင်၊ အကြင် အခါ၌ လောဘသည် လူကို လွှမ်းမိုးဖိစီး၏၊ ထိုအခါ၌ အမိုက်တိုက်သဖွယ် ဖြစ်၏။
အကြင်သူသည် လောဘကို ပယ်နိုင်သောကြောင့် တပ်မက်ဖွယ် ရူပါရုံစသည်၌ မတပ်မက်၊ ရေပေါက်သည် ကြာရွက်မှ လျှောကျဘိ သကဲ့သို့ ထိုသူ၏ လောဘ သည် ထိုတပ်မက်ဖွယ် အာရုံမှ ကင်းပျောက်၏။
အကျိုးမဲ့ကို ဖြစ်စေတတ်၏၊ ဒေါသသည် စိတ်ကို ချောက်ချားစေတတ်၏၊ အတွင်း စိတ်၌ ဖြစ်သော ထိုဒေါသဟူသော ဘေးကို လူအပေါင်းသည် မသိနိုင်။ အမျက် ထွက်သောသူသည် အကျိုးကို မသိ၊ အမျက်ထွက်သော သူသည် တရားကို မမြင်၊ အကြင်အခါ၌ ဒေါသသည် လူကို လွှမ်းမိုးဖိစီး၏၊ ထိုအခါ၌ အမိုက်တိုက်သဖွယ် ဖြစ်၏။
အကြင်သူသည် ဒေါသကို ပယ်သောကြောင့် အမျက်ထွက်ဖွယ် ရူပါရုံစသည်၌ အမျက်မထွက်၊ ထန်းသီးမှည့်သည် အညှာမှ ကြွေကျရ သကဲ့သို့ ထိုသူ၏ ဒေါသ သည် ထိုအမျက်ထွက်ဖွယ် အာရုံမှ ကင်းပျောက်၏။
အကျိုးမဲ့ကို ဖြစ်စေတတ်၏၊ မောဟသည် စိတ်ကို ချောက်ချားစေတတ်၏၊ အတွင်း စိတ်၌ ဖြစ်သော မောဟဟူသော ဘေးကို လူအပေါင်းသည် မသိနိုင်။ တွေဝေသူ သည် အကျိုးကိုမသိ၊ တွေဝေသူသည် တရားကိုမမြင်၊ အကြင်အခါ၌ မောဟသည် လူကို လွှမ်းမိုးဖိစီး၏၊ ထိုအခါ၌ အမိုက်တိုက်သဖွယ် ဖြစ်၏။
အကြင်သူသည် မောဟကို ပယ်သောကြောင့် တွေဝေဖွယ် ရူပါရုံစသည်၌ မတွေ ဝေ၊ ထွက်ပေါ်လာသော နေမင်းသည် အမိုက်တိုက်ကို ပယ်ဖျောက် သကဲ့သို့ ထို သူသည် အလုံးစုံသော မောဟကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်ဖျောက်နိုင်၏'' ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
မြတ်စွာဘုရား ဟောအပ်၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်။၈၈
၉ - အန္တရာမလသုတ်၊ စတုတ္ထ၀ဂ်၊ ဣတိဝုတ်ပါဠိတော်။
Posted by U Lawkanartha at 3/29/2009 09:05:00 PM Links to this post
ဤခန္ဓာကိုယ်သည် ကွဲပြိုခြင်း သဘောရှိ၏...
ဘိဒုရသုတ်- (ကျိုးလွယ်သည်၊ ကွဲလွယ်သည်)
ဤခန္ဓာကိုယ်သည် ကွဲပြိုခြင်း သဘောရှိ၏၊
ဝိညာဏ်သည် ကင်းပြတ်ခြင်း သဘောရှိ၏၊
ဥပဓိ* အားလုံးတို့သည် အမြဲမရှိကုန်၊ ဆင်းရဲကုန်၏၊
''ကွဲပြိုခြင်း သဘောရှိသော ခန္ဓာကိုယ်ကို လည်းကောင်း၊ ကင်းပြတ်ခြင်း သဘော ရှိသော ဝိညာဏ်ကိုလည်းကောင်းသိ၍ ဥပဓိအားလုံးတို့၌ ဘေးကိုလည်း တွေ့မြင် လျက် ပွါးများပြီးသော ကိုယ်စိတ်ရှိသူသည် မြတ်သော ငြိမ်းအေးရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်၍ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း သေခြင်းကို လွန်မြောက်ပြီးဖြစ်ရကား မိမိအသက်ကို မနှစ်သက်ဘဲ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရ မည့်ကာလကို ကြည့်ရှု ဆိုင်းငံ့၏'' ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
မြတ်စွာဘုရား ဟောအပ်၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာခဲ့ရပါသည်။၇၇
၈ - ဘိဒုရသုတ်၊ တတိယ၀ဂ်၊ ဣတိဝုတ်ပါဠိတော်။
(၁) ခန္ဓာငါးပါးသည် ခန္ဓုပဓိ
(၂) ကိလေသာဟူသမျှသည် ကိလေသုပဓိ
(၃) ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံသည် အဘိသင်္ခါရုပဓိ
(၄) ကာမဂုဏ်ငါးပါးသည် ကာမဂုဏုပဓိ။
Posted by U Lawkanartha at 3/29/2009 08:19:00 PM Links to this post
သေသည်ရှိသော် နောင်တ ပူပန်ရတတ်၏ ...
အနုတပ္ပိယသုတ် - (နောင်တပူပန်စေတတ်သည်)
ထိုအခါ၌ အသျှင်သာရိပုတြာသည် ရဟန်းတို့ကို မိန့်ဆို၏-
ငါ့သျှင်တို့ အကြင် အကြင် အခြင်းအရာအားဖြင့် နေခြင်းကို ပြုသော ရဟန်းအား သေသည်ရှိသော် နောင်တ ပူပန်ရတတ်၏၊ ထိုထို အခြင်းအရာအားဖြင့် ရဟန်း သည် နေခြင်းကို ပြု၏။
အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် သေသည်ရှိသော် နောင်တ ပူပန်ရတတ်သော အခြင်းအရာအားဖြင့် နေခြင်းကို ပြုသနည်း။
ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် အမှုသစ်၌ မွေ့လျော်၏၊ အမှုသစ်၌ ပျော်ပိုက်၏၊
အမှုသစ်၌ မွေ့လျော်သည့် အဖြစ်ကို အဖန်ဖန် အားထုတ်၏။ စကား ပြောခြင်း၌ မွေ့လျော်၏။ အိပ်ခြင်း၌ မွေ့လျော်၏။ အပေါင်းအဖော်၌ မွေ့လျော်၏။ နှီးနှောမှု (ငါးမျိုး)၌ မွေ့လျော်၏။ ချဲ့ထွင်မှု'ပပဉ္စတရား'၌ မွေ့လျော်၏၊ ချဲ့ထွင်မှု၌ ပျော်ပိုက် ၏၊ ချဲ့ထွင်မှု၌ မွေ့လျော်သည့် အဖြစ်ကို အဖန်ဖန်အားထုတ်၏။
ဤသို့လျှင် ရဟန်းသည် သေသည်ရှိသော် နောင်တ ပူပန်ရတတ်သော အခြင်း အရာ အားဖြင့် နေခြင်းကို ပြု၏။
ဤရဟန်းကို ထင်ရှားရှိသော ခန္ဓာငါးပါး (သက္ကာယ)၌ မွေ့လျော်သော ရဟန်း၊ ဝဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးကို ကောင်းစွာ ပြုရန် သက္ကာယကို မစွန့်ပယ်နိုင်သော ရဟန်း ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။
အကြင် အကြင် အခြင်းအရာအားဖြင့် နေခြင်းကို ပြုသော ရဟန်းအား သေသည် ရှိသော် နောင်တ ပူပန်ခြင်း မရှိ၊ ထိုထို အခြင်းအရာအားဖြင့် ရဟန်းသည် နေခြင်း ကို ပြု၏။
အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် သေသည်ရှိသော် နောင်တ ပူပန်ရခြင်း မရှိသော အခြင်းအရာအားဖြင့် နေခြင်းကို ပြုသနည်း။
ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် အမှုသစ်၌ မမွေ့လျော်၊ အမှုသစ်၌ မပျော်ပိုက်၊ အမှုသစ်၌ မွေ့လျော်သည့် အဖြစ်ကို အဖန်ဖန် အားမထုတ်။ စကားပြောခြင်း၌ မမွေ့လျော်။ အိပ်ခြင်း၌ မမွေ့လျော်။ အပေါင်းအဖော်၌ မမွေ့လျော်။ နှီးနှောမှု (ငါးမျိုး)၌ မမွေ့လျော်။ ချဲ့ထွင်မှု 'ပပဉ္စတရား'၌ မမွေ့လျော်။ ချဲ့ထွင်မှု၌ မပျော် ပိုက်၊ ချဲ့ထွင်မှု၌ မွေ့လျော်သည့် အဖြစ်ကို အဖန်ဖန် အားမထုတ်။
ဤသို့လျှင် ရဟန်းသည် သေသည်ရှိသော် နောင်တပူပန်ခြင်း မရှိသော အခြင်း အရာအားဖြင့် နေခြင်းကို ပြု၏။
ဤရဟန်းကို နိဗ္ဗာန်၌ မွေ့လျော်သော ရဟန်း၊ ဝဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးကို ကောင်းစွာ ပြုရန် သက္ကာယကို စွန့်ပယ်နိုင်သော ရဟန်းဟူ၍ ဆိုအပ်၏ ဟု (မိန့်ဆို၏)။
သားသမင်နှင့် တူသူသည် ချဲ့ထွင်မှု 'ပပဉ္စတရား'၌ အဖန်ဖန် အားထုတ်သည် ဖြစ် ၍ ချဲ့ထွင်မှု၌ မွေ့လျော်ရကား ယောဂလေးပါးတို့ကုန်ရာ အတု မရှိသော နိဗ္ဗာန်ကို လွဲချော်စေ၏။
ချဲ့ထွင်မှု 'ပပဉ္စတရား'ကို စွန့်၍ ချဲ့ထွင်မှု မရှိရာ နိဗ္ဗာန်၌ မွေ့လျော်သူသည် ယောဂ လေးပါး ကုန်ရာ အတုမရှိသော နိဗ္ဗာန်ကို ပြည့်စုံစေ၏ ဟု (မိန့်ဆို၏)။
၅ - အနုတပ္ပိယသုတ်၊ သာရဏီရ၀ဂ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/29/2009 06:23:00 PM Links to this post
ဒါတွေမှ ဝေးကွာသည့်အတွက် အရဟ...
ရဟန်းတို့ တရားခုနစ်မျိုးတို့မှ ဝေးကွာသည်၏ အဖြစ်ကြောင့် အရဟာမည်၏။
၁။ ထင်ရှားရှိသော ခန္ဓာငါးပါး၌ အမြင်မှားမှု 'သက္ကာယဒိဋ္ဌိ' မှ ဝေးကွာ၏။
၂။ မဝေခွဲနိုင်မှု 'ဝိစိကိစ္ဆာ' မှ ဝေးကွာ၏။
၃။ ခွေး နွား စသည်တို့၏ အလေ့အကျင့်ကို အမှန်ဟု မှားသောအားဖြင့် သုံးသပ်မှု 'သီလဗ္ဗတပရာမာသ' မှဝေးကွာ၏။
၄။ စွဲမက်မှု 'ရာဂ' မှ ဝေးကွာ၏။
၅။ အမျက်ထွက်မှု 'ဒေါသ' မှ ဝေးကွာ၏။
၆။ တွေဝေမှု 'မောဟ' မှ ဝေးကွာ၏။
၇။ ထောင်လွှားမှု 'မာန' မှ ဝေးကွာ၏။
ရဟန်းတို့ ဤတရား ခုနစ်မျိုးတို့မှ ဝေးကွာသည်၏ အဖြစ်ကြောင့် အရဟာမည်၏ ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၈ - အရဟာသုတ်၊ သမဏ၀ဂ်၊ သတ္တကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/29/2009 08:16:00 AM Links to this post
တလသတ္တိက... လက်ဝါးဖြင့် ပုတ်ခတ်ရန်...
တလသတ္တိက သိက္ခာပုဒ် - (လက်ဝါးပြင်)
ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ်သူဌေး၏ အရံဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူ သောအခါ ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်း တို့သည် အမျက်ထွက်သည်ဖြစ်၍ နှလုံးမသာသည် ဖြစ်၍ သတ္တရသဝဂ္ဂီရဟန်းတို့ အား လက်ဝါးဖြင့် (ပုတ်ခတ်ရန်) ရွယ်ကုန်၏။
ထိုရဟန်းတို့သည် ပုတ်ခတ်ခြင်း ခံရဖန်များသောကြောင့် ငိုကြွေးကုန်၏။
''ငါ့သျှင်တို့ သင်တို့သည် အဘယ့်ကြောင့် ငိုကြွေးကုန်သနည်း'' ဟု မေးကုန်၏။
ငါ့သျှင်တို့ ဤဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းတို့သည် အမျက်ထွက်သည်ဖြစ်၍ နှလုံးမသာသည်ဖြစ် ၍ ငါတို့အား လက်ဝါးဖြင့် (ပုတ်ခတ်ရန်) ရွယ်ကုန်၏ဟု (ပြောဆိုကုန်၏)။
အလိုနည်းသော ရဟန်းတို့သည် ...
အဘယ့်ကြောင့် ဆဗ္ဗဂ္ဂီရဟန်းတို့သည် အမျက်ထွက်သည်ဖြစ်၍ နှလုံးမသာသည် ဖြစ်၍ သတ္တရသဝဂ္ဂီရဟန်းတို့အား လက်ဝါးဖြင့် (ပုတ်ခတ်ရန်) ရွယ်ကုန်ဘိသနည်း ဟု ကဲ့ရဲ့ကုန်၏၊ ရှုတ်ချကုန်၏၊ အပြစ်ပြ ပြောဆိုကြကုန်၏။ပ။
ရဟန်းတို့ သင်တို့သည် ...
အမျက်ထွက်သည်ဖြစ်၍ နှလုံးမသာသည်ဖြစ်၍ သတ္တရသဝဂ္ဂီရဟန်းတို့အား လက် ဝါးဖြင့် ပုတ်ခတ်ရန် ရွယ်ကုန်၏ဟူသည် မှန်သလော''ဟု စိစစ် မေးမြန်းတော်မူ၏။
(မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျားတို့ သင်တို့သည် အဘယ့်ကြောင့် အမျက်ထွက်သည်ဖြစ်၍ နှလုံးမသာသည်ဖြစ်၍ သတ္တရသဝဂ္ဂီ ရဟန်းတို့အား လက်ဝါးဖြင့် (ပုတ်ခတ်ရန်) ရွယ်ကုန်ဘိသနည်း။ (မဂ်ဖိုလ်မှ) အချည်းနှီး ဖြစ်သော ယောက်ျားတို့ ဤ (သင်တို့ပြုမိသောအမှု) သည် မကြည်ညိုသေးသော သူတို့အား ကြည်ညို စေခြင်းငှါ လည်းကောင်း။ပ။
ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ဤသိက္ခာပုဒ်တော်ကို ပြကြကုန်လော့။
''အကြင်ရဟန်းသည် ရဟန်းအား အမျက်ထွက်သည်ဖြစ်၍ နှလုံးမသာသည်ဖြစ်၍ လက်ဝါးဖြင့် (ပုတ်ခတ်ရန်) ရွယ်အံ့၊ (ထိုရဟန်းအား) ပါစိတ်အာပတ် သင့်၏'' ဤသို့ (ပြကြကုန်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏)။
၅ - တလသတ္တိက သိက္ခာပုဒ်၊
သဟဓမ္မိကဝဂ်၊ ဘိက္ခုပါစိတ်အခန်း၊ ပါစိတ်ပါဠိတော်။
Posted by U Lawkanartha at 3/29/2009 06:57:00 AM Links to this post
ငါသည် အဆင်းဖောက်ပြန်မှုသို့ ...
ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုအပ်၍ ရဟန်းအား ဖြစ်ထိုက်သည့် ဤသညာ သုံးမျိုး တို့သည် တရားခုနစ်မျိုးတို့ကို ပြည့်စေကုန်၏။
၁။ ငါသည် အဆင်းဖောက်ပြန်မှုသို့ ရောက်၍ နေ၏။
၂။ ငါ၏ အသက်မွေးမှုသည် သူတစ်ပါးတို့နှင့် ဆက်စပ်နေ၏။
၃။ ငါသည် လူ့အသွင်အပြင်မှ အခြားသော ရဟန်းအသွင်အပြင်ကို ပြုအပ်၏။
၁။ သီလတို့၌ မပြတ် ဖြည့်ကျင့်လေ့ရှိ၏၊
၂။ မပြတ် ဖြစ်ခြင်းရှိ၏၊
၄။ ဆင်းရဲခြင်း မရှိ၊
၅။ အလွန် မာန်မူခြင်း မရှိ၊
၆။ သိက္ခာကို လိုလား၏၊
အသက်၏ အရံအတားဖြစ်သော ပစ္စည်းတို့၌ ဤအကျိုးငှါတည်းဟု ဆင်ခြင်၏၊
၇။ ထက်သန်သော လုံ့လရှိလျက်လည်း နေ၏။
ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုအပ်၍ ရဟန်းအား ဖြစ်ထိုက်သည့် ဤသညာ သုံးမျိုး တို့သည် တရားခုနစ်မျိုးတို့ကို ပြည့်စေကုန်၏ ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၁ - သမဏသညာသုတ်၊ သမဏသညာဝဂ်၊ ဒဿကနိပါတ်၊ အဂုင်္တ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/28/2009 03:03:00 PM Links to this post
လဍူးမုန့် သုံခုလှူ၍ ရရှိလာသော အကျိုးတရား ...
(မောဒက=ကတွတ်မုန့်၊ လဍူးမုန့်၊ ဗယာကျော်)
ငါသည် ငါ၏ ဝေစုအဖို့ကို ယူ၍ ရေခပ်ရန် သွားလတ်သော် ...
လမ်းခရီး၌ ငြိမ်သက်သော စိတ်ရှိသော တည်ကြည်သော ရဟန်းကို ဖူးမြင်ရသည် ရှိသော် ကြည်ညိုဝမ်းမြောက်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ကတွတ် (လဍူး)မုန့် သုံးခု တို့ကို လှူဒါန်းခဲ့၏။
ကောင်းစွာ ပြုအပ်သော ထိုကံကြောင့် လည်းကောင်း၊ စေတနာ, တောင့်တမှုတို့ ကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကိုးဆယ့်တစ်ကမ္ဘာတို့ပတ်လုံး ငါသည် ဖရိုဖရဲ ပျက်စီးကျ ရာ ငရဲသို့ မရောက်ခဲ့ရပေ။
ငါသည် စည်းစိမ်ရှိသည်၏အဖြစ်ကို ပြုလုပ်၍ အလုံးစုံသော စည်းစိမ်ကို ခံစားခဲ့၏၊ ငါသည် ကတွတ်မုန့်သုံးခုတို့ကို လှူခဲ့ခြင်းကြောင့် တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိသော နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ရပေ၏။
ငါသည် ကိလေသာတို့ကို ရှို့မြှိုက် လောင်ကျွမ်းစေအပ်ကုန်ပြီ။ပ။ အာသဝ မရှိဘဲ နေရ၏။ ငါ၏ လာခြင်းကား ကောင်းသောလာခြင်း စင်စစ် ဖြစ်ပေ၏။ပ။ အဆုံးအမ တော်ကို လိုက်နာ ပြုကျင့်အပ်ပါပြီ။ လေးပါးသော ပဋိသမ္ဘိဒါတို့ကို လည်းကောင်း။ အဆုံးအမတော်ကို လိုက်နာကျင့် သုံးပြီးပါပြီ။
၃ - မောဒကဒါယိကာထေရီအပဒါန်၊ ဧကူပေါသထိက၀ဂ်၊ ထေရီအပဒါန်ပါဠိတော်။
Posted by U Lawkanartha at 3/28/2009 02:39:00 PM Links to this post
ပယ်အပ်သော ကိုးပါးသော တရားတို့သည် အဘယ်တို့နည်း။
တဏှာအကြောင်းရင်းရှိသော ကိုးပါးသော တရားတို့တည်း။
၁။ တပ်မက်ခြင်းတဏှာကို စွဲ၍ ရှာမှီးခြင်း ဖြစ်၏။
၂။ ရှာမှီးခြင်းကို စွဲ၍ ရရှိခြင်း ဖြစ်၏။
၃။ ရရှိခြင်းကို စွဲ၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဖြစ်၏။
၄။ ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို စွဲ၍ လိုချင်စွဲမက်ခြင်း 'ဆန္ဒ ရာဂ'ဖြစ်၏။
၅။ လိုချင်စွဲမက်ခြင်း'ဆန္ဒရာဂ'ကိုစွဲ၍ အလွန်အားကြီးသော စွဲမက်ခြင်းရာဂ ဖြစ်၏။
၆။ အလွန်အားကြီးသော စွဲမက်ခြင်း ရာဂကို စွဲ၍ သိမ်းဆည်းခြင်း ဖြစ်၏။
၇။ သိမ်းဆည်းခြင်းကို စွဲ၍ ဝန်တိုခြင်းဖြစ်၏။
၈။ ဝန်တိုခြင်းကို စွဲ၍ စောင့်ရှောက်ခြင်း ဖြစ်၏။
၉။ စောင့်ရှောက်ခြင်းအကြောင်းကို စွဲ၍ ဥစ္စာဒဏ် ယူခြင်း ဓားလက်နက်ကိုင်ခြင်း ငြင်းခုံခြင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်း ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောခြင်း 'နင် နင်' ဟုဆိုခြင်း၊ ကုန်း တိုက်ခြင်း မဟုတ်မမှန်ပြောခြင်း ဟူသော များစွာသော ယုတ်မာသော အကုသိုလ် တရားတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။
ဤကိုးပါးသော တရားတို့ကို ပယ်အပ်ကုန်၏။ တရား ကိုးပါးစု မှ... 359
ဒသုတ္တရ၀ဂ်၊ ပါထိက၀ဂ်ပါဠိတော်၊ ဒီဃနိကာယ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/28/2009 10:23:00 AM Links to this post
ဂန္ဓဇာတသုတ်- ???. ရနံ့သည် အရပ်မျက်နှာများသို့...
အသျှင်အာနန္ဒာသည် မြတ်စွာဘုရားအထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ ရှိခိုးပြီးလျှင် တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်လျက် မြတ်စွာဘုရားအား-
လေအောက်သို့သာ ရနံ့သွား၍ လေညာသို့ ရနံ့မသွားသော
နံ့သာမျိုးတို့သည် သုံးမျိုးတို့ ပါတည်း...၊
၁။ အမြစ် နံ့သာမျိုး၊
၂။ အနှစ် နံ့သာမျိုး၊
၃။ အပွင့် နံ့သာမျိုးတို့တည်း၊
အသျှင်ဘုရား လေအောက်သို့သာ ရနံ့သွား၍ လေညာသို့ ရနံ့မသွားသော နံ့သာ မျိုးတို့သည် ဤသုံးမျိုးတို့ပါတည်း။
လေအောက်သို့လည်း သွားနိုင် လေညာသို့လည်း သွားနိုင် လေအောက် လေညာ နှစ်နေရာလုံးသို့လည်း သွားနိုင်သော တစ်စုံတစ်ခုသော နံ့သာမျိုးသည် ရှိနိုင်ပါသ လော ဟု လျှောက်၏။
လေအောက်သို့လည်း ရနံ့သွားနိုင် လေညာသို့လည်း ရနံ့သွားနိုင် လေအောက် လေညာ နှစ်နေရာလုံးသို့လည်း ရနံ့သွားနိုင်သော တစ်စုံတစ်ခုသော နံ့သာမျိုး သည် ရှိ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
အသျှင်ဘုရား အဘယ်ပါနည်း ဟု (လျှောက်၏)။
အာနန္ဒာ ဤလောကဝယ် ...
အကြင် ရွာနိဂုံး၌ ယောက်ျားဖြစ်စေ မိန်းမဖြစ်စေ ဘုရားတရားသံဃာကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်၏၊ သူ့ အသက်သတ်ခြင်း, မပေးသည်ကို ယူခြင်း, ကာမတို့၌ မှားယွင်း စွာ လွန်ကျူးခြင်း, မဟုတ်မမှန် ပြောဆိုခြင်း, မေ့လျော့ကြောင်းဖြစ်သော သေရည် အရက်ကို သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ သီလရှိ၏၊ ကောင်းသော သဘောရှိ၏၊ ဝန်တိုခြင်းဟူသော အညစ်အကြေးမှ ကင်းသောစိတ်ဖြင့် အိမ်ကို အုပ်ချုပ်နေ၏၊ လွတ်လွတ် စွန့်လေ့ရှိ၏၊ ဆေးကြော ပြီးသော လက်ရှိ၏၊ စွန့်ကြဲမှု၌ ပျော်ပိုက်၏၊ တောင်းခံသူတို့နှင့် ဆက်စပ်လျက် ရှိ၏၊ ပေးကမ်းခြင်း ဝေဖန်ခြင်း၌ ပျော်ပိုက်၏။
သမဏဗြာဟ္မဏတို့သည် ထိုသူ၏ဂုဏ်သတင်းကို အရပ်လေးမျက်နှာတို့၌ ပြောဆို ကုန်၏-
''ဤမည်သော ရွာနိဂုံး၌ (ဤမည်သော) ယောက်ျားသည်လည်းကောင်း၊ မိန်းမ သည်လည်းကောင်း ဘုရားတရား သံဃာကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်၏၊ သူ့အသက် သတ်ခြင်း, မပေးသည်ကို ယူခြင်း, ကာမတို့၌ မှားယွင်းစွာ လွန်ကျူးခြင်း, မဟုတ် မမှန် ပြောဆိုခြင်း, မေ့လျော့ကြောင်းဖြစ်သော သေအရက်ကို သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏၊ သီလရှိ၏၊ ကောင်းသော သဘောရှိ၏၊ ဝန်တိုခြင်း ဟူသော အညစ် အကြေးမှ ကင်းသော စိတ်ဖြင့် အိမ်ကို အုပ်ချုပ်နေ၏၊ လွတ်လွတ် စွန့်ကြဲလေ့ရှိ ၏၊ ဆေးကြောပြီးသော လက်ရှိ၏၊ စွန့်ကြဲမှု၌ ပျော်ပိုက်၏၊ တောင်းခံသူတို့နှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ၏၊ ပေးကမ်းခြင်း ဝေဖန်ခြင်း၌ ပျော်ပိုက်၏''ဟု ပြောဆိုကြကုန်၏။
နတ်တို့သည်လည်း ထိုသူ၏ ဂုဏ်သတင်းကို ပြောဆိုကြကုန်၏- ပ - ။
အာနန္ဒာ လေအောက်သို့လည်း ရနံ့သွားနိုင် လေညာသို့လည်း ရနံ့သွားနိုင် လေ အောက် လေညာ နှစ်နေရာလုံးသို့လည်း ရနံ့သွားနိုင်သော နံ့သာမျိုးကား ဤ (ဆိုခဲ့ပြီး သရဏဂုံ, သီလ စသည်နှင့် ပြည့်စုံခြင်း) ဂုဏ်သတင်း ပေတည်း။ ၈၀
ပန်းတို့၏ ရနံ့သည် လေညာသို့ မရောက်နိုင်၊ စန္ဒကူး တောင်စလပ် ကြက်ရုံး ပန်းတို့၏ ရနံ့သည်လည်း လေညာသို့ မရောက်နိုင်ကုန်၊ သူတော်ကောင်းတို့၏ ရနံ့သည်ကား လေညာသို့ ရောက်နိုင်၏၊ သူတော်ကောင်းသည်ကား အရပ်ဆယ် မျက်နှာအားလုံးတို့ကို ဂုဏ်သတင်းရနံ့ဖြင့် သင်းပျံ့လွှမ်းမိုးနိုင်၏ဟု မိန့်တော်မူ၏။
၉ - ဂန္ဓဇာတသုတ်၊ အာနန္ဒ၀ဂ်၊ တိကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/27/2009 07:10:00 PM Links to this post
ဘဝသုတ် - ဘ၀တဖန် ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းသည်ကား...
ပဌမ ဘဝသုတ် -
ထိုအခါ အသျှင်အာနန္ဒာသည် ...
မြတ်စွာဘုရား အထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် ရှိခိုး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်လျက် မြတ်စွာဘုရားအား- ''အသျှင်ဘုရား 'ဘဝ ဘဝ'ဟု ဆိုပါ၏၊ အသျှင်ဘုရား အဘယ် မျှလောက် အတိုင်းအရှည်ဖြင့် ဘဝဖြစ်ပါသနည်း'' ဟု လျှောက်၏။
ချစ်သား အာနန္ဒာ ...
ကာမဓာတ် (ကာမဘုံ) ၌ အကျိုးပေးတတ်သော ကံ မဖြစ်ခဲ့လျှင် ကာမဘဝသည် ထင်ရှား ဖြစ်ပေါ်နိုင်အံ့လော ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ ထင်ရှား မဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ အသျှင် ဘုရား၊ အာနန္ဒာ ဤသို့လျှင် ကံသည် လယ်ယာမြေနှင့် တူ၏၊ ဝိညာဉ်သည် မျိုးစေ့ နှင့် တူ၏၊ တဏှာသည် အစေး 'ရေ' နှင့်တူ၏။ အဝိဇ္ဇာပိတ်ပင်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍ တဏှာ အနှောင်အဖွဲ့ ရှိကုန်သော သတ္တဝါတို့အား ယုတ်နိမ့်သော ကာမ ဓာတ် (ကာမဘုံ) ၌ ဝိညာဉ်သည် တည်၏။ ဤသို့တည်သော် နောင်တစ်ဖန် ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ရ၏။
ရူပဓာတ် (ရူပဘုံ) ၌ အကျိုးပေးတတ်သော ကံ မဖြစ်ခဲ့လျှင် ရူပဘဝသည် ထင်ရှား
ဖြစ်ပေါ်နိုင်အံ့လောဟု (မေးတော်မူ၏)။ အသျှင်ဘုရား ထင်ရှားမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါ။ အာနန္ဒာ ဤသို့လျှင် ကံသည် လယ်ယာမြေနှင့် တူ၏၊ ဝိညာဉ်သည် မျိုးစေ့နှင့် တူ၏၊ တဏှာသည် အစေး 'ရေ' နှင့် တူ၏။ အဝိဇ္ဇာပိတ်ပင်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍ တဏှာ အနှောင်အဖွဲ့ ရှိကုန်သော သတ္တဝါတို့အား အလယ်အလတ် ဖြစ်သော ရူပဓာတ် (ရူပဘုံ) ၌ ဝိညာဉ်သည် တည်၏။ ဤသို့တည်သော် နောင်တစ်ဖန် ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ရ၏။
အရူပဓာတ် (အရူပဘုံ) ၌ အကျိုးပေးတတ်သော ကံ မဖြစ်ခဲ့လျှင် အရူပဘဝသည် ထင်ရှား ဖြစ်ပေါ်နိုင်အံ့လောဟု (မေးတော်မူ၏)။ အသျှင်ဘုရား ထင်ရှားမဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါ။ အာနန္ဒာ ဤသို့လျှင် ကံသည် လယ်ယာမြေနှင့် တူ၏၊ ဝိညာဉ်သည် မျိုးစေ့ နှင့် တူ၏၊ တဏှာသည် အစေး 'ရေ'နှင့် တူ၏။ အဝိဇ္ဇာပိတ်ပင်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍ တဏှာ အနှောင်အဖွဲ့ ရှိကုန်သော သတ္တဝါတို့အား မြတ်သော အရူပဓာတ် (အရူပ ဘုံ) ၌ ဝိညာဉ်သည် တည်၏။ ဤသို့ တည်သော် နောင်တစ်ဖန် ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ရ ၏၊ အာနန္ဒာ ဤသို့လျှင် ဘဝဖြစ်သတည်းဟု (ဟောတော်မူ၏)။ ၇၇
၆ - ပဌမ ဘဝသုတ်၊ အာနန္ဒာဝဂ်၊ တိကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/27/2009 05:31:00 PM Links to this post
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဒေဝဒတ် (သင်းခွဲ) ထွက်သွား၍ မကြာမြင့်မီ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူ၏၊ ထိုအခါ မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဒေဝဒတ်ကိုအကြောင်းပြု၍ ရဟန်းတို့ကို မိန့်တော်မူ၏-
မိမိကိုယ်ကို သတ်ခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏၊ ပျက်စီးခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏။
ငှက်ပျောပင်သည် မိမိကိုယ်ကို သတ်ခြင်းငှါ အသီးကို သီးပေးရသကဲ့သို့ ပျက်စီး ခြင်းငှါ အသီးကို သီးပေးရသကဲ့သို့ ရဟန်းတို့ ဤအတူသာလျှင် မိမိကိုယ်ကို သတ်ခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ် ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏၊ ပျက်စီးခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော် အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏။
ဝါးပင်သည် မိမိကိုယ်ကို သတ်ခြင်းငှါ အသီးကို သီးပေးရသကဲ့သို့ ပျက်စီးခြင်းငှါ အသီးကို သီးပေးရသကဲ့သို့ ရဟန်းတို့ ဤအတူသာလျှင် မိမိကိုယ်ကို သတ်ခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏၊ ပျက်စီးခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏။
ကျူပင်သည် မိမိကိုယ်ကို သတ်ခြင်းငှါ အသီးကို သီးပေးရသကဲ့သို့ ပျက်စီးခြင်းငှါ
အသီးကို သီးပေးရသကဲ့သို့ ရဟန်းတို့ ဤအတူသာလျှင် မိမိကိုယ်ကို သတ်ခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏၊ ပျက်စီးခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏။
အဿတိုရ်မြင်းမသည် မိမိကိုယ်ကို သတ်ခြင်းငှါ ကိုယ်ဝန်ကို ယူသကဲ့သို့ ပျက်စီး ခြင်းငှါ ကိုယ်ဝန်ကို ယူရသကဲ့သို့ ရဟန်းတို့ ဤအတူသာလျှင် မိမိကိုယ်ကို သတ် ခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏၊ ပျက်စီး ခြင်းငှါ ဒေဝဒတ်အား လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ဖြစ်ခဲ့၏။
ဤသို့လျှင် လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောသည် ခက်ထန်၏၊ ရဟန်းတို့ ဤ သို့လျှင် သင်တို့ကျင့်ရမည်၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားတော်ကို ဟောတော်မူ ၏၊
ကောင်းသော စကားကိုဆိုတော်မူတတ်သော လူနတ်တို့၏ ဆရာဖြစ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားကို ဟောတော်မူပြီး၍ ထို့ပြင်တစ်ပါး ဤဂါထာကို ဟောတော်မူ၏-
''စင်စစ်အားဖြင့် ငှက်ပျောသီးသည် ငှက်ပျောပင်ကို သတ်သကဲ့သို့ ဝါးသီးသည် ဝါးပင်ကို သတ်သကဲ့သို့ ကျူသီးသည် ကျူပင်ကို သတ်သကဲ့သို့ အဿတိုရ်မြင်းမ ၏ ကိုယ်ဝန်သည် မြင်းမကို သတ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ပူဇော်သကာ အကျော်အစော သည် ယောက်ျားယုတ်ကို သတ်၏'' ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၅ - အစိရပက္ကန္တသုတ်၊ စတုတ္ထ၀ဂ်၊ နိဒါန၀ဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော်။
Posted by U Lawkanartha at 3/27/2009 04:41:00 PM Links to this post
သင်္ဂါမဇိသုတ်- မယားဟောင်းသည် ...
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ်သူဌေး၏ အရံဖြစ် သော ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ အသျှင်သင်္ဂါမဇိသည် သာဝတ္ထိပြည်သို့ မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြော်ခြင်းငှါ ရောက်လာ၏။ အသျှင်သင်္ဂါမဇိ၏ မယားဟောင်းသည် ''အသျှင်သင်္ဂါမဇိသည် သာဝတ္ထိပြည်သို့ ရောက်လာသည်''ဟု ကြား၍ သားငယ်များကို ခေါ်ယူလျက် ဇေတဝန်ကျောင်းသို့ သွား၏။
ထိုအခါ အသျှင်သင်္ဂါမဇိသည် ...
သစ်ပင်တစ်ပင်၏ အရင်း၌ နေ့သန့်စင်ခြင်းဖြင့် ထိုင်နေတော်မူ၏။
အသျှင်သင်္ဂါမဇိ၏ မယားဟောင်းသည် အသျှင်သင်္ဂါမဇိထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ အသျှင် သင်္ဂါမဇိအား'' ရဟန်း သားငယ်ရှိသော ကျွန်တော်မကို လုပ်ကျွေးပါလော့'' ဟု ဤ စကားကို လျှောက်၏။
ဤသို့ လျှောက်လေသော် အသျှင်သင်္ဂါမဇိသည် ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။
နှစ်ကြိမ်မြောက်လည်း အသျှင်သင်္ဂါမဇိ၏ မယားဟောင်းသည် အသျှင်သင်္ဂါမဇိ အား ''ရဟန်း သားငယ်ရှိသော ကျွန်တော်မကို လုပ်ကျွေးပါလော့''ဟု လျှောက်၏။
နှစ်ကြိမ်မြောက်လည်း အသျှင် သင်္ဂါမဇိသည် ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။
သုံးကြိမ်မြောက်လည်း အသျှင်သင်္ဂါမဇိ၏ မယားဟောင်းသည် အသျှင်သင်္ဂါမဇိ အား ''ရဟန်း သားငယ်ရှိသော ကျွန်တော်မကို လုပ်ကျွေးပါလော့''ဟု လျှောက်၏။
သုံးကြိမ်မြောက်လည်း အသျှင် သင်္ဂါမဇိသည် ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။
ထိုအခါ အသျှင်သင်္ဂါမဇိ၏ မယားဟောင်းသည် ...
ထိုကလေးကို အသျှင်သင်္ဂါမဇိ၏ ရှေ့၌ ချထား၍ ''ရဟန်း ဤကလေးသည် သင်၏ သားတည်း။ ထိုသားကို လုပ်ကျွေးလော့'' ဟု (ဆိုကာ) ဖဲသွားလေ၏။
ထိုကလေးကို ကြည့်လည်း မကြည့်၊ စကားလည်း မပြော၊
မနီးမဝေးအရပ်သို့ ရောက်၍ ပြန်ကြည့်လတ်သော် ထိုကလေးကို ကြည့်လည်း မကြည့်၊ စကားလည်းမပြောသော အသျှင်သင်္ဂါမဇိကိုမြင်သောကြောင့် ''ဤရဟန်း သည် သားဖြင့်လည်း အလိုမရှိဟု ထိုမယားဟောင်းအား အကြံဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ပြန်လှည့်၍ ကလေးကို ခေါ်ယူပြီးလျှင် ဖဲသွားလေ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် အထူး သဖြင့် စင်ကြယ်သော လူတို့၏ မျက်စိအမြင်ကိုလွန်သော နတ်မျက်စိနှင့် တူသော 'ဒိဗ္ဗစက္ခု' ဉာဏ်မျက်စိဖြင့် အသျှင်သင်္ဂါမဇိ မယားဟောင်း၏ ဤဖောက်ပြန်ပုံ သဘောကို မြင်တော်မူ၏။
ဤအနက် သဘောကို သိတော်မူ၍ ထိုသိသောအချိန်၌-
''လာသော မယားဟောင်းကို မနှစ်သက်၊ ပြန်သွားသည်ကို မစိုးရိမ်၊ ကပ်ငြိ တွယ် တာခြင်းမှ လွတ်သော သင်္ဂါမဇိရဟန်းကို ဗြာဟ္မဏ (ရဟန္တာ)ဟု ငါဘုရားဟော၏'' ဟု ဤဥဒါန်းကို ကျူးရင့်တော်မူ၏။
၈ - သင်္ဂါမဇိသုတ်၊ ဗောဓိဝဂ်၊ ဥဒါန်းပါဠိတော်၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/27/2009 03:36:00 PM Links to this post
ဆေးသမားတို့သည် သည်းခြေကြောင့် ဖြစ်သော အနာတို့ကို ပျောက်စေခြင်းငှါ လည်းကောင်း၊ သလိပ်ကြောင့်ဖြစ်သော အနာတို့ကို ပျောက်စေခြင်းငှါ လည်း ကောင်း၊ လေကြောင့်ဖြစ်သော အနာတို့ကို ပျောက်စေခြင်းငှါ လည်းကောင်း ဝမ်း နုတ်ဆေးကို ပေးကုန်၏။
ထိုဝမ်းနုတ်ဆေးသည် ရှိသည်သာတည်း၊ ထိုဆေး မရှိဟု ငါမဆို။
ထိုဝမ်းနုတ်ဆေးသည် (ကိစ္စ) ပြီးသည်လည်း ရှိ၏၊ မပြီးသည်လည်း ရှိ၏။
ငါသည်ကား အပြစ်ကို ပယ်ထုတ်တတ်သော မြတ်သော တရားဟူသော ဝမ်းနုတ် ဆေးကို ဟောပေအံ့၊ ယင်းဝမ်းနုတ်ဆေးသည် (ကိစ္စ) ပြီးသည်သာတည်း၊ မပြီး သည် မဟုတ်။ ယင်း ဝမ်းနုတ်ဆေးကိုစွဲ၍ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း သဘောရှိသော သတ္တ ဝါတို့သည် ပဋိသန္ဓေနေခြင်းမှ လွတ်မြောက်ကုန်၏၊ အိုခြင်း သဘောရှိသော သတ္တ ဝါတို့သည် အိုခြင်းမှ လွတ်မြောက်ကုန်၏၊ သေခြင်းသဘောရှိသော သတ္တဝါတို့ သည် သေခြင်းမှ လွတ်မြောက်ကုန်၏၊ စိုးရိမ်ခြင်း ငိုကြွေးခြင်း ဆင်းရဲခြင်း နှလုံး မသာယာခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း သဘောရှိသော သတ္တဝါတို့သည် စိုးရိမ်ခြင်း ငို ကြွေးခြင်း ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာယာခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ လွတ်မြောက် ကုန်၏။
ကောင်းစွာ နှလုံးသွင်းကြ ကုန်လော့၊ ဟောပေအံ့ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
''အသျှင်ဘုရား ကောင်းပါပြီ'' ဟု ထိုရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ပြန်ကြား လျှောက်ထားကုန်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤတရားတော်ကို ဟောတော်မူ၏။
ထိုမြတ်သော ဝမ်းနုတ်ဆေးသည် အဘယ်နည်း ...
ယင်းဝမ်းနုတ်ဆေးသည် (ကိစ္စ) ပြီးသည်သာတည်း၊ မပြီးသည်မဟုတ်။ ယင်းဝမ်း နုတ်ဆေးကို စွဲ၍ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း သဘောရှိသော သတ္တဝါတို့သည် ပဋိသန္ဓေ နေခြင်းမှ လွတ်မြောက်ကုန်၏၊ အိုခြင်း သဘောရှိသော သတ္တဝါတို့သည် အိုခြင်းမှ လွတ်မြောက်ကုန်၏၊ သေခြင်းသဘောရှိသော သတ္တဝါတို့သည် သေခြင်းမှ လွတ် မြောက်ကုန်၏၊ စိုးရိမ်ခြင်း ငိုကြွေးခြင်း ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာယာခြင်း ပြင်းစွာ ပင်ပန်းခြင်း သဘောရှိသော သတ္တဝါတို့သည် စိုးရိမ်ခြင်း ငိုကြွေးခြင်း ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာယာခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ လွတ်မြောက်ကုန်၏။
မှန်ကန်သော အမြင်ရှိသူအား မှားယွင်းသော အမြင်သည် ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်၏။ မှား ယွင်းသော အမြင်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် များစွာကုန်သော ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ်တရားတို့သည် ထိုသူအား ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်ကုန်၏။ မှန် ကန်သော အမြင်ဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း များစွာကုန်သော ကုသိုလ် တရားတို့သည် ပွါးများ ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။
မှားယွင်းသော အကြံအစည်သည် ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်၏။ ပ။
မှားယွင်းသော စကားသည် ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်၏။ ပ။
မှားယွင်းသော အလုပ်သည် ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်၏။ ပ။
မှန်ကန်သော အသက်မွေးမှု ရှိသူအား
မှားယွင်းသော အသက်မွေးမှုသည် ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်၏။ ပ။
မှားယွင်းသော လုံ့လသည် ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်၏။ ပ။
မှားယွင်းသော သတိသည် ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်၏။ ပ။
မှားယွင်းသော သမာဓိသည် ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်၏။ ပ။
မှားယွင်းသော ဉာဏ်သည် ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်၏။ ပ။
မှားယွင်းသော လွတ်မြောက်မှုသည် ပယ်နုတ်ပြီးဖြစ်၏။ မှားယွင်းသော လွတ် မြောက်မှုဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် များစွာကုန်သော ယုတ်ညံ့ သော အကုသိုလ်တရားတို့သည် ထိုသူအား ပယ်နုတ်ပြီး ဖြစ်ကုန်၏။ မှန်ကန်သော လွတ်မြောက်မှုဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း များစွာကုန်သော ကုသိုလ်တ ရားတို့သည် ပွါးများ ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။
ဤကား မြတ်သော ဝမ်းနုတ်ဆေးတည်း...။
ယင်းဝမ်းနုတ်ဆေးသည် (ကိစ္စ) ပြီးသည် သာတည်း၊ ကိစ္စမပြီးသည် မဟုတ်။ ယင်းဝမ်းနုတ်ဆေးကို စွဲ၍ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း သဘောရှိသော သတ္တဝါတို့သည် ပဋိ သန္ဓေနေခြင်းမှ လွတ်မြောက်ကုန်၏။ပ။ စိုးရိမ်ခြင်း ငိုကြွေးခြင်း ဆင်းရဲခြင်း နှလုံး မသာယာခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း သဘောရှိသော သတ္တဝါတို့သည် စိုးရိမ်ခြင်း ငိုကြွေးခြင်း ဆင်းရဲခြင်း နှလုံးမသာယာခြင်း ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့မှ လွတ်မြောက် ကုန်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။၁၀၈
၈ - တိကိစ္ဆကသုတ်၊ သမဏသညာဝဂ်၊ ဒဿကနိပါတ်၊ အဂုင်္တ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/26/2009 05:28:00 PM Links to this post
ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ မြင်ရာ၌ မြင်ကာမျှ ဖြစ်လတ္တံ့ ...
ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ မြင်ရာ၌ မြင်ကာမျှ ဖြစ်လတ္တံ့ သင်ဤသို့ကျင့်ရမည်
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ် သူဌေး၏ အရံဖြစ် သော ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။
သစ်သားပျဉ်ချပ် ဝတ်သောကြောင့် ဒါရုစီရိယမည်သော ဗာဟိယသည် ရိုသေခြင်း လေးမြတ်ခြင်း မြတ်နိုးခြင်း ပူဇော်ခြင်း တုပ်ဝပ်ခြင်းကို ခံယူလျက် သင်္ကန်း ဆွမ်း ကျောင်း သူနာတို့၏ အထောက်အပံ့ ဆေးအသုံးအဆောင်ကို ရသည်ဖြစ်၍ သမုဒ္ဒ ရာကမ်းခြေ သုပ္ပါရကဆိပ်၌ နေ၏။
ဒါရုစီရိယမည်သော ဗာဟိယအား ဆိတ်ငြိမ်ရာသို့ ကပ်၍ တစ်ယောက်တည်း ကိန်းအောင်းရာ၌ ''လောက၌ ရဟန္တာတို့သည် လည်းကောင်း၊ အရဟတ္တမဂ်သို့ ရောက်ကြသော သူတို့သည် လည်းကောင်းရှိကုန်၏။ ငါသည် ထိုသူတို့တွင် တစ်ယောက် အပါအဝင်တည်း'' ဟု ဤသို့ စိတ်အကြံသည် ဖြစ်၏။
ဗာဟိယ၏ ရှေးဘဝက ဆွေမျိုးတော်ဖူးသော နတ်သားသည် စောင့်ရှောက်လို သည် အစီးအပွါးကို အလိုရှိသည်ဖြစ်၍ သစ်သား အဝတ်ဝတ်သော ဗာဟိယ၏ စိတ်အကြံကို မိမိစိတ်ဖြင့် သိသောကြောင့် သစ်သား အဝတ် ဝတ်သော ဗာဟိယ ရှိရာသို့ ချဉ်းကပ်၍ သစ်သား အဝတ်ဝတ်သော ဗာဟိယကို ''ဗာဟိယ သင်သည် ရဟန္တာလည်းမဟုတ်၊ အရဟတ္တမဂ်သို့ ရောက်သူလည်းမဟုတ်၊ အကြင်အကျင့် ဖြင့် သင်သည် ရဟန္တာလည်း ဖြစ်ရာ၏။ အရဟတ္တမဂ် သို့လည်း ရောက်ရာ၏။ သင့်အား ထိုအကျင့်မျှသော်လည်း မရှိ'' ဟု ဤစကားကို ပြောဆို၏။
ဗာဟိယသည် နတ်သားအား နတ်နှင့်တကွသော လောက၌ ရဟန္တာသည် လည်း ကောင်း၊ အရဟတ္တမဂ်သို့ ရောက်သော သူတို့သည် လည်းကောင်း အဘယ်အရပ် ၌ နေကြကုန်သနည်းဟု (မေးလေ၏)။
ဗာဟိယ ဥတ္တရတိုင်း ဇနပုဒ်တို့၌ သာဝတ္ထိမည်သော မြို့သည်ရှိ၏။ ထိုသာဝတ္ထိမြို့ ၌ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံသော တရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန် စွာ သိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် ယခုအခါ၌ နေတော်မူ၏။
ဗာဟိယ ထိုမြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန္တာလည်းဟုတ်၏။
ရဟန္တာ ဖြစ်ခြင်းငှါ တရားကိုလည်း ဟော၏ဟု (ပြောလေ၏)။
သစ်သား ပျဉ်ချပ်ဝတ်သော ဗာဟိယသည် ထိုနတ်သား၏ ထိတ်လန့်စေမှုကြောင့် ထိုခဏ၌ပင် သုပ္ပါရက ဆိပ်ကမ်းမှ ဖဲသွားလေ၏။ ခရီးအားလုံးတို့၌ တစ်ညဉ့်အိပ် နေခြင်းဖြင့် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ်သူဌေး၏ အရံဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်း သို့ ရောက်၏။ ထိုအခါ၌ များစွာသော ရဟန်းတို့သည် လွင်တီးခေါင်၌ စင်္ကြံသွား ကုန်၏။
သစ်သားပျဉ်ချပ် ဝတ်သော ဗာဟိယသည် ထိုရဟန်းတို့ ရှိရာသို့ ချဉ်းကပ်၍ ထို ရဟန်းတို့ကို... ''အသျှင်ဘုရားတို့ ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော (အလုံးစုံ သောတရားတို့ကို) ကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် ယခုအခါ အဘယ်မှာ နေပါသနည်း? အလုံးစုံသော တရားတို့ကို ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိတော်မူ သော ပူဇော်အထူးကို ခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြင်လိုပါကုန်၏'' ဟု လျှောက်ထား၏။
ဗာဟိယမြတ်စွာဘုရားသည် ဆွမ်း အလို့ငှါ ရွာတွင်းသို့ ဝင်တော်မူ၏။
သစ်သားပျဉ်ချပ်ဝတ်သော ဗာဟိယသည် လျင်မြန်သော သဘောရှိကာ ဇေတဝန် ကျောင်းတော်မှထွက်၍ သာဝတ္ထိမြို့သို့ ဝင်လတ်သော် ကြည်ညိုဖွယ်ရှိသော ကြည်ညိုဖွယ်ကို ဆောင်သော ငြိမ်သက်သော ဣနြေ္ဒရှိသော ငြိမ်းအေး သော စိတ်ရှိသော မြတ်သော ဒမထ, သမထသို့ရောက်သော ယဉ်ကျေးသော လုံခြုံ သော ရဟန်း ဣနြေ္ဒရှိသော ရဟန္တာ ဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားကို သာဝတ္ထိမြို့၌ ဆွမ်းခံ လှည့်လည်သည်ကို မြင်သောကြောင့် မြတ်စွာဘုရား ရှိရာသို့ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရား၏ ခြေတော်တို့ကို ဦးဖြင့်တိုက်၍ မြတ်စွာဘုရားအား ...
''အသျှင်ဘုရား အကြင်တရားတော်သည် တပည့်တော်၏ ရှည်ကြာစွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံး အစီးအပွါးအလို့ငှါ ချမ်းသာအလို့ငှါ ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရား မြတ်စွာ ဘုရားသည် တပည့်တော်အား ထိုတရားကို ဟောတော်မူပါလော့၊ ကောင်းသော စကားကို ဆိုတော်မူ တတ်သော မြတ်စွာဘုရား ထိုတရားကို တပည့်တော်အား ဟောတော်မူပါလော့'' ဟု ဤစကားကို လျှောက်ထား၏။ ဤသို့ လျှောက်ထား လတ်သော် မြတ်စွာဘုရားသည် သစ်သား ပျဉ်ချပ်ဝတ်သော ဗာဟိယကို ...
''ဗာဟိယ အခါမဟုတ်သေး၊ ဆွမ်းအလို့ငှါ ရွာတွင်းသို့ ဝင်နေ၏'' ဟု ဤစကားကို မိန့်တော်မူ၏။
သစ်သားပျဉ်ချပ်ဝတ်သော ဗာဟိယသည် မြတ်စွာဘုရားအား ''အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရား၏ အသက်အန္တရာယ်တို့ကို လည်းကောင်း၊ တပည့်တော်၏ အသက် အန္တရာယ်တို့ကို လည်းကောင်း သိနိုင်ခဲပါ၏။ အကြင် တရားတော်သည် တပည့် တော်၏ ရှည်ကြာစွာသော နေ့ညဉ့်ပတ်လုံး အစီးအပွါး အလို့ငှါ ချမ်းသာ အလို့ငှါ ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရား မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်အား ထိုတရားကို ဟော တော်မူပါလော့၊ ကောင်းသော စကားကို ဆိုတော် မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရား ထိုတရားကို တပည့်တော်အား ဟောတော်မူပါလော့'' ဟု ဤစကားကို လျှောက် ထား၏။
နှစ်ကြိမ်မြောက်လည်း မြတ်စွာဘုရားသည် သစ်သားပျဉ်ချပ်ဝတ်သော ဗာဟိယကို ''ဗာဟိယ အခါမဟုတ်သေး၊ ရွာတွင်းသို့ ဆွမ်းအလို့ငှါ ဝင်နေ၏'' ဟု ဤစကားကို မိန့်တော်မူ၏။
သစ်သားပျဉ်ချပ်ဝတ်သော ဗာဟိယသည် -ပ- လျှောက်ထား၏။
ထိုသို့ ဖြစ်လျှင် ဗာဟိယ သင်သည် ဤသို့ ကျင့်အပ်၏
''မြင်ရာ၌ မြင်ကာမျှ ဖြစ်လတ္တံ့။
ကြားရာ၌ ကြားကာမျှ ဖြစ်လတ္တံ့။
တွေ့ရာ၌ တွေ့ကာမျှ ဖြစ်လတ္တံ့။
သိရာ၌ သိကာမျှ ဖြစ်လတ္တံ့'' ဟု ဤသို့ သင်သည် ကျင့်အပ်၏။
ဗာဟိယ အကြင်အခါ၌ သင်သည်
မြင်ရာ၌ မြင်ကာမျှ ဖြစ်လတ္တံ့။
သိရာ၌ သိကာမျှ ဖြစ်လတ္တံ့။
ဗာဟိယ ထိုအခါ သင်သည် ထိုရာဂ စသည်နှင့်တကွ မဖြစ်လတ္တံ့။
ဗာဟိယ အကြင်အခါ သင်သည် ထိုရာဂ စသည်နှင့်တကွ မဖြစ်လတ္တံ့။
ဗာဟိယ ထိုအခါ သင်သည် ထိုရူပါရုံ စသည်၌ (နှစ်သက်မှု ပြစ်မှားမှု တွေဝေမှု) မဖြစ်လတ္တံ့။ ဗာဟိယ အကြင်အခါ ထိုရူပါရုံ စသည်၌ (နှစ်သက်မှု ပြစ်မှားမှု တွေ ဝေမှု) မဖြစ်လတ္တံ့။ ဗာဟိယ ထိုအခါ သင်သည် ဤမျက်မှောက်ဘဝ၌ လည်း ကောင်း၊ တမလွန်ဘဝ၌လည်းကောင်း၊ နှစ်ပါးစုံဘဝ၌လည်းကောင်း မဖြစ်လတ္တံ့။ ဤသည်ပင်လျှင် ဆင်းရဲ၏ အဆုံးတည်းဟု (ဟောတော်မူ၏)။
ထိုအခါ သစ်သားပျဉ်ချပ်ကို ဝတ်သော ဗာဟိယမထေရ်အား ဤအကျဉ်းဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရား တရားဟောခြင်းဖြင့် ထိုခဏ၌ပင်လျှင် မစွဲလမ်းမူ၍ အာသဝေါ တရားတို့မှ စိတ်သည် လွတ်၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် သစ်သားပျဉ်ချပ်ကို ဝတ်သော ဗာဟိယမထေရ်ကို ဤအကျဉ်းဖြစ်သော ဆုံးမခြင်းဖြင့် ဆုံးမ၍ ဖဲကြွတော်မူ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရား ဖဲကြွ၍ မကြာမီ နို့စို့သားငယ်ရှိသော နွားမသည် သစ်သား ပျဉ်ချပ်ကို ဝတ်သော ဗာဟိယမထေရ်ကို ဝှေ့၍ ဇီဝိတိနြေ္ဒမှ ချ၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိမြို့၌ ဆွမ်းအလို့ငှါ လှည့်လည်၍ ဆွမ်းခံပြီး သည်မှ နောက်၌ ဆွမ်းခံရွာမှ ဖဲကြွခဲ့ပြီးသော် များစွာသော ရဟန်းတို့နှင့်အတူ သာဝတ္ထိမြို့မှ ထွက်တော်မူ၍ သေသော သစ်သားပျဉ်ချပ်ကို ဝတ်သော ဗာဟိယ ကို မြင်၍ ရဟန်းတို့ကို ''ရဟန်းတို့ ဆောင်ယူကြလော့၊ သစ်သားပျဉ်ချပ်ကို ဝတ်သော ဗာဟိယ၏ ကိုယ်ကောင်ကို ညောင်စောင်းပေါ်သို့ တင်၍ ထုတ်ဆောင် လျက် မီးရှို့ကြကုန်လော့၊ ထိုဗာဟိယ၏ စေတီကိုလည်း ပြုကြကုန်လော့၊ ရဟန်း တို့ သင်တို့၏ သီတင်းသုံးဖော်သည် သေ၏'' ဟု မိန့်တော်မူ၏။
''အသျှင်ဘုရား ကောင်းပါပြီ'' ဟု ထိုရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရား၏ (စကားကို) ဝန်ခံ၍ သစ်သားပျဉ်ချပ်ကို ဝတ်သော ဗာဟိယ၏ ကိုယ်ကောင်ကို ညောင်စောင်း ပေါ်သို့ တင်၍ ထုတ်ဆောင်လျက် မီးရှို့၍ ထိုဗာဟိယ၏ စေတီကိုလည်း ပြုလျက် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင်မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုး၍ တစ်ခုသော အရပ်၌ နေကြကုန်၏။ တစ်ခုသော အရပ်၌ နေပြီးသော ထိုရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရား အား ''အသျှင်ဘုရား သစ်သားပျဉ်ချပ်ကို ဝတ်သော ဗာဟိယ၏ ကိုယ်ကောင်ကို မီးရှို့အပ်ပါပြီ။ ထိုဗာဟိယ၏ စေတီကိုလည်း ပြုအပ်ပါပြီ။
ထိုဗာဟိယ၏ လားရာ ဂတိကား အဘယ်ပါနည်း...?
ရှေးရှုရောက်ရာ တမလွန်ဘဝကား အဘယ်ပါနည်း''ဟု လျှောက်ထားကုန်၏။
ရဟန်းတို့ သစ်သားပျဉ်ချပ် ဝတ်သော ဗာဟိယသည် ပညာရှိ၏။ လောကုတ္တရာ တရားအား လျော်သောအကျင့်ကို ကျင့်၏။ တရားတည်းဟူသော အကြောင်း ကြောင့် ငါဘုရားကို မညှဉ်းဆဲ။ ရဟန်းတို့ သစ်သားပျဉ်ချပ် ဝတ်သော ဗာဟိယ သည် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤအနက်သဘောကို သိတော်မူ၍ ...
''အကြင် နိဗ္ဗာန်၌ အာပေါဓာတ်သည် လည်းကောင်း၊ ပထဝီဓာတ်သည် လည်း ကောင်း၊ တေဇောဓာတ်သည် လည်းကောင်း၊ ဝါယောဓာတ်သည် လည်းကောင်း မတည်နိုင်၊ ထိုနိဗ္ဗာန်၌ ကြယ်တို့သည် မတောက်ပကုန်။ နေသည်လည်း မတောက်ပ၊ လသည်လည်း မတောက်ပ၊ အမိုက်တိုက်လည်း မရှိ။ အကြင်အခါ၌ သစ္စာလေးပါးကို သိသောကြောင့် မုနိအမည်ရသော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်သည် ကိုယ်တိုင် နိဗ္ဗာန်ကို သိ၏။ နိဗ္ဗာန်ကို သိပြီးသည်မှ နောက်၌ ရုပ်မှလည်းကောင်း၊ နာမ်မှ လည်းကောင်း၊ ချမ်းသာဆင်းရဲမှ လည်းကောင်း လွတ်၏'' ဟု ဤဥဒါန်းကို ကျူးရင့်တော်မူ၏။
(မြတ်စွာဘုရားသည် ဤဥဒါန်းကိုလည်း ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားရဖူးပါ၏)။
၁ဝ - ဗာဟိယသုတ်၊ ဗောဓိဝဂ်၊ ဥဒါန်းပါဠိတော်၊ ခုဒ္ဒကနိကာယ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/26/2009 09:35:00 AM Links to this post
ထိန နှင့် မိဒ္ဓ သဘော...
လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း "ထိနမိဒ္ဓ" ဟူရာ၌ ...
ထိုတွင် အဘယ်သည် ''ထိုင်းခြင်း'' မည်သနည်း...
အကြင် စိတ်၏ ...
အမှုကိစ္စ၌ မဆောင်ရွက်နိုင်မှု 'အကမ္မညတာ'၊
ပျင်းရိခြင်း၌ ငြိတွယ်ပုံ အခြင်းအရာ 'သြလီယနာ'၊
ငြိကပ်ပုံ အခြင်းအရာ 'သလ္လီယနာ'၊
တွန့်ဆုတ်ပုံ အခြင်းအရာ 'လီယနာ'၊
တွန့်ဆုတ်တတ်သည်၏ အဖြစ် 'လီယိတတ္တ'၊
စိတ်၏ လေးလံမှုသဘော 'ထိန'၊
စိတ်၏ လေးလံသော အခြင်းအရာ 'ထိယနာ'၊
စိတ်၏ လေးလံသည်၏အဖြစ် 'ထိယိတတ္တ' သည် ရှိ၏။
ဤသဘောကို ထိုင်းခြင်း "ထိန"ဟု ဆိုအပ်၏။
ထိုတွင် အဘယ်သည် ''မှိုင်းခြင်း'' မည်သနည်း...
အကြင် စေတသိက်၏ ...
မြှေးယှက်ခြင်း သဘော 'သြနာဟ'၊
ထက်ဝန်းကျင် မြှေးယှက်ခြင်းသဘော 'ပရိယောနာဟ'၊
အတွင်း၌ ပိတ်ဆို့ခြင်းသဘော 'အန္တောသမောရောဓ'၊
မှိုင်းခြင်းသဘော 'မိဒ္ဓ'၊ အိပ်ခြင်းသဘော 'သုပ္ပ'၊
ငိုက်မျဉ်းခြင်း သဘော 'ပစလာယိကာ'၊
အိပ်မှု သဘော 'သုပ္ပ'၊
အိပ်သော အခြင်းအရာ 'သုပ္ပနာ'၊
အိပ်သည်၏အဖြစ် 'သုပ္ပိတတ္တ'သည် ရှိ၏။
ဤသဘောကို မှိုင်းခြင်း "မိဒ္ဓ"ဟု ဆိုအပ်၏။
ဗောဓိပက္ခိယတရားများ-မှ၊ ဈာန၀ိဘင်္ဂ္ဂ၊ ၀ိဘင်းပါဠိတော်။
Posted by U Lawkanartha at 3/26/2009 09:12:00 AM Links to this post
ရဟန်းတို့ သေမင်းတမန်တို့သည် ဤသုံးမျိုးတို့တည်း။
ဤလောက၌ အချို့သော သူသည် ...
ကိုယ်ဖြင့် မကောင်းမှုကို ပြုကျင့်၏၊
နှုတ်ဖြင့် မကောင်းမှုကို ပြုကျင့်၏၊
စိတ်ဖြင့် မကောင်းမှုကို ပြုကျင့်၏။
ထိုသူသည် ကိုယ်ဖြင့် မကောင်းမှုကို ပြုကျင့်သောကြောင့် နှုတ်ဖြင့် မကောင်းမှုကို ပြုကျင့်သောကြောင့် စိတ်ဖြင့် မကောင်းမှုကို ပြုကျင့်သောကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာ ပျက်စီး၍ သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ချမ်းသာကင်းသော မကောင်းသဖြင့် လားရာ ပျက်စီး၍ ကျရောက်ရာဖြစ်သော ငရဲ၌ ဖြစ်ရ၏။ ရဟန်းတို့ ထိုသူကို ငရဲထိန်းတို့ သည် အသီးအသီး လက်မောင်းတို့၌ ဆွဲကိုင်၍ ယမမင်းအား ပြကုန်၏၊
''မင်းမြတ် ဤယောက်ျားသည် အမိ၌ သားသမီးတို့ ကျင့်ဝတ် ချွတ်ယွင်း၏၊ အဖ၌ သားသမီးတို့ ကျင့်ဝတ် ချွတ်ယွင်း၏၊ သမဏတို့၌ လူတို့ ကျင့်ဝတ် ချွတ်ယွင်း၏၊ ဗြာဟ္မဏတို့၌ လူတို့ ကျင့်ဝတ် ချွတ်ယွင်း၏၊ အမျိုး၌ ကြီးသော သူ (အဖိုး အဖွား ဦးကြီး ဦးလေး စသည်) တို့ကို အရိုအသေမပြု။ မင်းမြတ်သည် ဤယောက်ျားအား ဒဏ်ပေးတော်မူပါ'' ဟု ပြောဆိုကုန်၏။
ထိုသူကို ယမမင်းသည် ''အမောင်ယောက်ျား သင်သည် လူ့ပြည်တို့၌ ထင်ရှား ဖြစ်ပေါ်သော ပဌမသေမင်းတမန်ကို မမြင်ခဲ့ပါသလော'' ဟု ပဌမသေမင်းတမန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်း၏၊ စစ်ဆေး၏၊ ပြောဆို၏။ ''အသျှင် အကျွန်ုပ် မမြင်ခဲ့ပါ'' ဟု ထို ယောက်ျားသည် ပြန်ပြော၏။
ထိုသူကို ယမမင်းသည် ဤသို့ မေးမြန်း၏-
''အမောင်ယောက်ျား သင်သည် လူ့ပြည်တို့၌ အိမ်အခြင်ကဲ့သို့ ကိုင်းသော ခါး ကုန်းသော တောင်ဝှေးကို အားထား နေရသော တုန်တုန်ရီရီ သွားလာနေသော အိုနာ နှိပ်စက်နေသော အရွယ်လွန်သော သွားကျိုးသော ဆံဖြူသော ခေါင်းပြောင် နေသော ဦးခေါင်းတုန်လှုပ်သော အရေတွန့်လိပ်၍ မှဲ့ခြောက်တို့ဖြင့် ပြိုးပြွမ်းသော ကိုယ်ရှိသော ပဋိသန္ဓေမှ အသက်အားဖြင့် ရှစ်ဆယ်သော် လည်းကောင်း၊ ကိုး ဆယ်သော် လည်းကောင်း၊ တစ်ရာသော် လည်းကောင်း ရှိသော အမယ်အိုကို ဖြစ် စေ အဖိုးအိုကို ဖြစ်စေ မမြင်ခဲ့ပါသလော'' ဟု (မေးပြန်၏)။
''အသျှင် မြင်ခဲ့ပါ၏'' ဟု ထို ယောက်ျားသည် ပြန်ပြော၏။
ထိုသူကို ယမမင်းသည် ဤသို့ မေး၏-
''အမောင်ယောက်ျား သင်သည် သိကြားလိမ္မာသည် ဖြစ်ပါလျက် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သည် ဖြစ်ပါလျက် 'ငါသည် လည်း အိုခြင်းသဘော ရှိ၏၊ အိုခြင်းသဘောကို မလွန်နိုင်ချေ၊ ငါသည် ယခုအခါ ကိုယ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း ကောင်းမှုကို ပြုအံ့' ဟု ဤသို့သော စိတ်အကြံသည် မဖြစ်ခဲ့ပါသလော''ဟု (မေး၏)။ ''အရှင် အကျွန်ုပ်သည် (ကောင်းမှုကို ပြုခြင်းငှါ) မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ၊ မေ့လျော့ခဲ့ပါသည်'' ဟု ထို ယောက်ျားသည် ပြန်ပြော၏။
ထိုသူကို ယမမင်းသည် ဤသို့ ဆို၏-
''အမောင် ယောက်ျား သင်သည် မေ့လျော့သောကြောင့် ကိုယ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း ကောင်းမှုကို မပြုခဲ့လေ၊ အမောင် ယောက်ျား အကြင် အခြင်းအရာအားဖြင့် သင်သည် မေ့လျော့ခဲ့၏၊ ထို အခြင်း အရာ အားဖြင့် သင့်ကို မချွတ်ပြုကြကုန် လတ္တံ့၊ ထို မကောင်းမှုကို သင့် အမိသည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် အဖသည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် ညီအစ်ကိုသည် ပြုသည် မဟုတ်၊ သင့် အစ်မနှမသည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် အဆွေခင်ပွန်း ချစ်ကျွမ်းဝင်သူ တို့သည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် ဆွေမျိုး သားချင်း တို့သည် ပြုသည်မဟုတ်၊ နတ်တို့သည် ပြုသည် မဟုတ်၊ သမဏဗြာဟ္မဏတို့သည် ပြုသည် မဟုတ်၊ စင်စစ် အားဖြင့် သင်သည်ပင် ထို မကောင်းမှုကို ပြုခဲ့၏၊ ထို မကောင်းမှု၏ အကျိုးကို သင်သည်ပင် ခံစားရ လတ္တံ့'' ဟု (ဆို၏)။ (၁)
ထိုသူကို ယမမင်းသည် ပဌမသေမင်းတမန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းစစ်ဆေး ပြော ဆိုပြီးလျှင် ''အမောင်ယောက်ျား သင်သည် လူ့ပြည်တို့၌ ထင်ရှားဖြစ်သော ဒုတိ ယသေမင်း တမန်ကို မမြင်ခဲ့ပါ သလော'' ဟု ဒုတိယသေမင်းတမန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းပြန်၏၊ စစ်ဆေး ပြန်၏၊ ပြောဆိုပြန်၏။ ''အရှင် အကျွန်ုပ် မမြင်ခဲ့ပါ'' ဟု ထို ယောက်ျားသည် ပြန်ပြော၏၊
ထိုသူကို ယမမင်းသည် ဤသို့ မေးပြန်၏-
''အမောင် ယောက်ျား သင်သည် လူ့ပြည်တို့၌ အနာဖြင့် နှိပ်စက်အပ်သော ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်နေသော ပြင်းစွာ မကျန်းမာသော မိမိကျင်ကြီးကျင်ငယ်၌ လိမ်းကျံပေရေလျက် အိပ်ရသော သူတစ်ပါး ထူပေးမှ ထနိုင်သော အိပ်ရာသို့ သူတစ်ပါးတို့ ချီမပို့ဆောင်အပ်သော လူနာမိန်းမကိုသော် လည်းကောင်း၊ လူနာ ယောက်ျားကိုသော် လည်းကောင်း သင် မမြင်ခဲ့ပါသလော''ဟု (မေးပြန်၏)။
''အရှင် အကျွန်ုပ် မြင်ခဲ့ပါ၏'' ဟု ထို ယောက်ျားသည် ပြောဆို၏။
''အမောင်ယောက်ျား သင်သည် သိကြားလိမ္မာသည် ဖြစ်ပါလျက်
အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သည် ဖြစ်ပါလျက် 'ငါသည်လည်း နာခြင်းသဘော ရှိ၏၊ နာခြင်းသဘောကို မလွန်နိုင်၊ ယခုအခါ ငါသည် ကိုယ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့် လည်းကောင်း ကောင်းမှုကို ပြုအံ့' ဟု ဤသို့သော စိတ် အကြံသည် မဖြစ်ခဲ့ပါသလော''ဟု(မေး၏)။ ''အရှင် အကျွန်ုပ်သည်ကား (ကောင်းမှု ပြုခြင်းငှါ) မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ၊ မေ့လျော့ခဲ့ပါသည်''ဟု ထို ယောက်ျားသည် ပြန် ပြော၏။
ထိုသူကို ယမမင်းသည် ဤသို့ဆို၏-
''အမောင် ယောက်ျား သင်သည် မေ့လျော့သောကြောင့် ကိုယ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့် လည်းကောင်း ကောင်းမှုကို မပြုခဲ့လေ၊ အမောင် ယောက်ျား အကြင် အခြင်းအရာ အားဖြင့် သင်သည် မေ့လျော့ခဲ့၏၊ ထို အခြင်း အရာအားဖြင့် သင့်ကို မချွတ်ပြုကြ ကုန်လတ္တံ့၊ ထို မကောင်းမှုကို သင့် အမိသည် ပြုသည် မဟုတ်၊ သင့် အဖသည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် ညီအစ်ကိုသည် ပြုသည် မဟုတ်၊ သင့် အစ်မနှမသည် ပြုသည် မဟုတ်၊ သင့် အဆွေခင်ပွန်းသည် ချစ်ကျွမ်း ဝင်သူ တို့သည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် ဆွေမျိုးသားချင်း တို့သည် ပြုသည်မဟုတ်၊ နတ်တို့ ပြုသည် မဟုတ်၊ သမဏဗြာဟ္မဏတို့ ပြုသည်မဟုတ်၊ စင်စစ်အားဖြင့် သင်သည်ပင် ထို မကောင်းမှုကို ပြုခဲ့၏၊ ထို မကောင်းမှု၏ အကျိုးကို သင်သည်ပင်
ခံစားရလတ္တံ့'' ဟု (ဆို၏)။ (၂)
ထိုသူကို ယမမင်းသည် ဒုတိယသေမင်းတမန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်း စစ်ဆေး ပြောဆိုပြီးလျှင် ''အမောင်ယောက်ျား သင်သည် လူ့ပြည်တို့၌ ထင်ရှားဖြစ်သော တတိယ သေမင်းတမန်ကို မမြင်ခဲ့ ပါသလော''ဟု တတိယသေမင်းတမန်ကို မေးမြန်းပြန်၏၊ စစ်ဆေးပြန်၏၊ ပြောဆိုပြန်၏။ ''အရှင် အကျွန်ုပ် မမြင်ခဲ့ပါ'' ဟု ထို ယောက်ျားသည် ပြန်ပြော၏၊ ရဟန်းတို့ ထိုသူကို ယမမင်းသည် ဤသို့ မေးပြန်၏- ''အမောင်ယောက်ျား သင်သည် လူ့ပြည်တို့၌ သေ၍ တစ်ရက်ရှိပြီးသော်လည်း ဖြစ်သော သေ၍ နှစ်ရက်ရှိပြီးသော်လည်းဖြစ်သော သေ၍ သုံးရက် ရှိပြီးသော် လည်း ဖြစ်သော ဖူးဖူးရောင်နေသော ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ညိုမဲနေသော ပြည်ကဲ့သို့ စက်ဆုပ်ဖွယ် အပုပ်ရည်ယိုစီးနေသော မိန်းမ သူသေကောင်ကိုဖြစ်စေ ယောက်ျား သူသေကောင် ကိုဖြစ်စေ သင် မမြင်ခဲ့ပါသလော'' ဟု (မေး၏)။
''အရှင် အကျွန်ုပ် မြင်ခဲ့ပါ၏''ဟု ထို ယောက်ျားသည် ပြန်ပြောဆို၏။
ထို ယောက်ျားကို ယမမင်းသည် ဤသို့ မေးပြန်၏-
''အမောင် ယောက်ျား သင်သည် သိကြားလိမ္မာသည် ဖြစ်ပါလျက် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သည် ဖြစ်ပါလျက် 'ငါသည်လည်း သေခြင်းသဘော ရှိ၏၊ သေခြင်းသဘော ကို မလွန်နိုင်၊ ယခုအခါ ငါသည် ကိုယ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း ကောင်းမှုကို ပြုအံ့'ဟု ဤသို့သော စိတ်အကြံသည် မဖြစ် ခဲ့ပါသလော''ဟု(မေးပြန်၏)။ ''အရှင် အကျွန်ုပ်သည်ကား (ကောင်းမှုကို ပြုခြင်းငှါ) မစွမ်း ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ၊ မေ့လျော့ခဲ့ပါသည်'' ဟု ထိုယောက်ျားသည် ပြန်ပြော၏။ ရဟန်းတို့ ထို ယောက်ျားကို ယမမင်းသည် ဤသို့ ဆိုပြန်၏- ''အမောင် ယောက်ျား သင်သည် မေ့လျော့သောကြောင့် ကိုယ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့် လည်း ကောင်း၊ စိတ်ဖြင့် လည်းကောင်း ကောင်းမှုကို မပြုခဲ့ပေ၊ အမောင် ယောက်ျား အကြင် အခြင်းအရာ အားဖြင့် သင်သည် မေ့လျော့ခဲ့၏၊ ထို အခြင်းအရာအားဖြင့် သင့်ကို မချွတ်ပြုကြ ကုန်လတ္တံ့၊ ထို မကောင်းမှုကို သင့် အမိသည် ပြုသည် မဟုတ်၊ သင့် အဖသည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် ညီအစ်ကိုသည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် အစ်မနှမသည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် အဆွေခင်ပွန်း ချစ်ကျွမ်း ဝင်သူတို့သည် ပြုသည်မဟုတ်၊ သင့် ဆွေမျိုးသားချင်းတို့သည် ပြုသည်မဟုတ်၊ နတ်တို့ ပြုသည် မဟုတ်၊ သမဏဗြာဟ္မဏတို့ ပြုသည်မဟုတ်၊ စင်စစ်အားဖြင့် သင်သည်ပင် ထို မကောင်းမှုကို ပြုခဲ့၏၊ ထို မကောင်းမှု၏ အကျိုးကို သင်သည်ပင် ခံစားရလတ္တံ့'' ဟု (ဆို၏)။ (၃)
ထိုသူကို ယမမင်းသည် တတိယသေမင်းတမန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းစစ်ဆေး ပြောဆိုပြီးသော် ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။ ရဟန်းတို့ ထို ယောက်ျားကို ငရဲထိန်းတို့သည် ငါးမျိုးသော နှောင်ဖွဲ့ခြင်း မည်သော ကမ္မကရဏကို ပြုကုန်၏၊ လောလောပူသော သံစို့ကို လက်၌ ရိုက်နှက် ကုန်၏၊ လောလောပူသော သံစို့ကို နှစ်ခုမြောက်သော လက်၌ ရိုက်နှက်ကုန်၏၊ လောလော ပူသော သံစို့ကို ခြေ၌ ရိုက်နှက်ကုန်၏၊ လောလော ပူသော သံစို့ကို နှစ်ခုမြောက်သော ခြေ၌ ရိုက်နှက်ကုန်၏၊ လောလော ပူသော သံစို့ကို ရင်အလယ်၌ ရိုက်သွင်းကုန်၏၊ ထိုယောက်ျားသည် ထိုသံစို့ငါး ချက် ရိုက်သွင်းသော နေရာတို့၌ ပြင်းထန်ကုန်သော ကြမ်းတမ်းကုန်သော ကျင်နာ စပ်ရှားကုန်သော ဆင်းရဲ ဝေဒနာတို့ကို ခံစားရ၏၊ အကြင်မျှလောက် ထို မကောင်း မှုကံ မကုန်သေး၊ ထို မျှလောက် မသေသေးပေ။
ရဟန်းတို့ ထိုသူကို ငရဲထိန်းတို့သည် ဆွဲငင်ကုန်၍ ဓားမကြီးတို့ဖြင့် ခုတ်ဖြတ် ကုန်၏၊ ထိုသူသည် ထိုသို့ ဓားမကြီးဖြင့် ခုတ်ဖြတ် ခံရသော နေရာ၌ ပြင်းထန် ကုန်သော ကြမ်းတမ်းကုန်သော ကျင်နာစပ်ရှား ကုန်သော ဆင်းရဲ ဝေဒနာတို့ကို ခံစားရ၏၊ အကြင် မျှလောက် ထို မကောင်းမှုကံသည် မကုန်သေး ထိုမျှလောက် မသေ သေးပေ။
ထိုသူကို ငရဲထိန်း တို့သည် စောက်ထိုးမိုးမျှော် ဆွဲကိုင်ကြ၍ ပဲခွပ်တို့ဖြင့် ခုတ်ရွေ ကုန်၏။ပ။ ရဟန်းတို့ ထိုသူကို ငရဲထိန်း တို့သည် ရထား၌ တပ်၍ ရဲရဲညီးသော အလျှံတပြောင်ပြောင် လောင်သော မီးတောက် မီးလျှံနှင့် တကွသော မြေအပြင်၌ အခေါက်ခေါက် အပြန်ပြန် မောင်းနှင်ကုန်၏။ပ။ ရဟန်းတို့ ထိုသူကို ငရဲထိန်းတို့ သည် ရဲရဲညီးသော အလျှံ တပြောင်ပြောင် လောင်သော မီးတောက်မီးလျှံနှင့် တကွသော မီးတောင်ကြီး သို့လည်း တက်စေ ဆင်းစေ ကုန်၏။ပ။ ရဟန်းတို့ ထိုသူကို ငရဲထိန်းတို့သည် စောက်ထိုးမိုးမျှော် ဆွဲကိုင်ကြ ၍ ရဲရဲညီးသော အလျှံ တပြောင်ပြောင် လောင်သော မီးတောက်မီးလျှံနှင့် တကွသော လောလော ပူ သော သံအိုးကြီး၌ ပစ်ချကုန်၏။ ထိုသူသည် ထို သံအိုးကြီး၌ အမြှုပ်ထလျက် ကျက်သည်ဖြစ်၍ အထက်သို့လည်း တစ်ကြိမ်ပေါ်၏၊ အောက်သို့လည်း တစ်ကြိမ် မြုပ်၏၊ ဖီလာလည်း တစ်ကြိမ် မျော၏။ ထိုသူသည် ထို သံအိုးကြီး၌ ပြင်းထန်ကုန် သော ကြမ်းတမ်းကုန်သော ကျင်နာစပ်ရှား ကုန်သော ဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကို ခံစားရ ၏၊ အကြင်မျှလောက် ထို မကောင်းမှုကံ မကုန်သေး၊ ထိုမျှလောက် မသေသေး ပေ။
ထိုသူကို ငရဲထိန်းတို့သည် (အဝီစိ) ငရဲကြီး၌ ပစ်ချကြ ကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ထို (အဝီစိ) ငရဲကြီးသည်ကား- အထောင့်လေးခု ရှိ၏၊ တံခါးလေးပေါက် ရှိ၏၊ ညီညာ သော အဖို့အားဖြင့် ဝေဖန် ပိုင်းခြားအပ်၏၊ သံတံတိုင်းဖြင့် ကာရံအပ်၏၊ သံပြားဖြင့် မိုးထား အပ်၏၊ ထို (အဝီစိ) ငရဲ၏ မြေပြင်သည် သံမြေပြင် ဖြစ်၏၊ အလျှံ တပြောင် ပြောင် တောက်လောင်နေ၏၊ အလျှံနှင့် ယှဉ်စပ်နေ၏၊ ထက်ဝန်းကျင် ယူဇနာ တစ်ရာ တိုင်တိုင် ပျံ့နှံ့၍ အမြဲတည်နေ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
၆ - ဒေဝဒူတသုတ်၊ ဒေ၀ဒူတ၀ဂ်၊ တိကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
ဒေဝဒူတ လင်္ကာ (လင်္ကာရေးသူ အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦး)--->
နိဗ္ဗိဒါသုတ် - (ငြီးငွေ့ခြင်း)
ရဟန်းတို့ ဤတရားငါးမျိုးတို့ကို ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုအပ်ကုန်သည် ရှိသော် စင်စစ်ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ စွဲမက်မှု 'ရာဂ' ကင်းခြင်းငှါ ချုပ်ခြင်းငှါ (ကိလေသာ) ငြိမ်းခြင်းငှါ ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းငှါ သစ္စာလေးပါးတရားကို သိခြင်းငှါ နိဗ္ဗာန် အကျိုးငှါ ဖြစ်ကုန်၏။
၁။ ခန္ဓာကိုယ်၌ မတင့်တယ်ဟု ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏။
၂။ မျိုအပ်သောအစာ 'အာဟာရ' ၌ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် ဟု အမှတ်ရှိ၏။
၃။ လောကအားလုံး၌ မွေ့လျော်ဖွယ် မရှိ ဟု အမှတ်ရှိ၏။
၄။ အလုံးစုံသော သင်္ခါရတရားတို့၌ မမြဲ ဟု ရှုလေ့ရှိ၏။
၅။ သေခြင်း၌ ဖြစ်သော အမှတ် 'မရဏသညာ'သည် ထိုရဟန်း၏ အတွင်းသန္တာန် ၌ ကောင်းစွာ တည်၏။
ရဟန်းတို့ ဤတရားငါးမျိုးတို့ကို ပွါးများအပ် ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုအပ်ကုန်သည် ရှိသော် စင်စစ် ငြီးငွေ့ခြင်းငှါ စွဲမက်မှု 'ရာဂ' ကင်းခြင်းငှါ ချုပ်ခြင်းငှါ (ကိလေသာ) ငြိမ်းခြင်းငှါ ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့် သိခြင်းငှါ သစ္စာ လေးပါးကို သိခြင်းငှါ နိဗ္ဗာန် အကျိုးငှါ ဖြစ်ကုန်၏ ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။၆၉
၉ - နိဗ္ဗိဒါသုတ်၊ သညာဝဂ်၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/25/2009 02:47:00 PM Links to this post
ရဟန်းတို့ အနာဂတ်ဘေး ငါးမျိုးတို့ကို ကောင်းစွာမြင်သော ရဟန်းသည် မရောက် သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် မမေ့မလျော့ ပြင်းစွာ အားထုတ်သော လုံ့လဖြင့်(နိဗ္ဗာန်)သို့ စေလွှတ်အပ်သော စိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍ နေခြင်းငှါ သင့်လျော်သည် သာလျှင်တည်း။
''ယခုအခါ ငါသည်ကား ပျိုမျစ်နုနယ် ငယ်ရွယ်၍ မည်းနက်သော ဆံပင်ရှိသေး၏၊ ပဌမအရွယ်ဖြစ်သော ကောင်းသော အရွယ်နှင့် ပြည့်စုံသေး၏၊ ဤကိုယ်သို့ အိုခြင်း 'ဇရာ' ထိရောက်သော အခါသည် ဖြစ်လာလိမ့်ဦးမည်၊ အိုခြင်း 'ဇရာ' နှိပ်စက်သည် ဖြစ်၍ အိုသူသည် ဘုရားသျှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ကို နှလုံးသွင်းရန် မလွယ်ကူ၊ အစွန်အဖျား ကျသော တောကျောင်းတို့ကို မှီဝဲရန် မလွယ်ကူ၊ အလိုမရှိအပ် မနှစ် သက်အပ် မမြတ်နိုးအပ်သော ထိုအိုခြင်း သဘောတရားသည် ငါ့ထံသို့ မရောက် လာမီ ငါသည် မရောက်သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက် ပြုရန် ယခုစောစောကပင် လုံ့လကို အားထုတ်တော့မည်၊ ငါသည် ယင်း (ဈာန်မဂ် ဖိုလ်) တရားနှင့် ပြည့်စုံပါမူ အိုသော်လည်း ချမ်းသာစွာ နေရပေလိမ့်မည်'' ဟု (ဆင်ခြင်၏)။
ရဟန်းတို့ ဤပဌမ အနာဂတ်ဘေးကို ကောင်းစွာ မြင်သော ရဟန်းသည် မရောက်သေးသည့် (ဈာန် မဂ်ဖိုလ်) သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်) ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် မမေ့မလျော့ ပြင်းစွာ အားထုတ်သော လုံ့လဖြင့် (နိဗ္ဗာန်) သို့ စေလွှတ်အပ်သောစိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍ နေခြင်းငှါ သင့်လျော်သည် သာလျှင်တည်း။
၈ - ဒုတိယ အနာဂတဘယသုတ်၊ ယောဓာဇီ၀၀ဂ်၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/25/2009 02:44:00 PM Links to this post
''ယခုအခါ ငါသည် အနာကင်း၏၊ ရောဂါကင်း၏၊ မအေးလွန်း မပူလွန်း အလယ် အလတ်ဖြစ်၍ ကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းရန် ခံ့သော၊ အစာကို အညီအမျှ ကြေကျက်စေ တတ်သည့် ဝမ်းမီးနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ဤကိုယ်သို့ နာခြင်း 'ဗျာဓိ' ထိရောက်သော အခါသည် ဖြစ်လာလိမ့်ဦးမည်၊ နာခြင်း 'ဗျာဓိ' နှိပ်စက်သည်ဖြစ်၍ နာသူသည် ဘုရားသျှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ကို နှလုံးသွင်းရန် မလွယ်ကူ၊ အစွန်အဖျား ကျသော တောကျောင်းတို့ကို မှီဝဲရန် မလွယ်ကူ၊ အလိုမရှိအပ် မနှစ်သက်အပ် မမြတ်နိုးအပ်သော ထိုနာခြင်း သဘောသည် ငါ့ထံသို့ မရောက်လာမီ ငါသည် မရောက်သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် ယခု စောစော ကပင် လုံ့လကို အားထုတ်တော့မည်၊ ငါသည် ယင်း (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)တရားနှင့် ပြည့်စုံပါမူ နာသော်လည်း ချမ်းသာစွာ နေရပေလိမ့်မည်'' ဟု (ဆင်ခြင်၏)။
ရဟန်းတို့ ဤဒုတိယ အနာဂတ်ဘေးကို ကောင်းစွာ မြင်သော ရဟန်းသည် မ ရောက်သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက် ပြုရန် မမေ့မလျော့ ပြင်းစွာ အားထုတ်သော လုံ့လဖြင့် (နိဗ္ဗာန်)သို့ စေလွှတ်အပ်သော စိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍ နေခြင်းငှါ သင့်လျော်သည် သာလျှင်တည်း။
Posted by U Lawkanartha at 3/25/2009 02:43:00 PM Links to this post
''ယခုအခါသည် ဝပြော၏၊ ကောက်စပါး ကောင်းမွန်၏၊ ဆွမ်းရလွယ်၏၊ သပိတ် လက်စွဲလျက် ဆွမ်းခံခြင်းဖြင့် မျှတရန် လွယ်ကူ၏၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး ကောက်စပါး မကောင်း၍ ဆွမ်းရခဲသော သပိတ်လက်စွဲလျက် ဆွမ်းခံခြင်းဖြင့် မျှတရန် မလွယ် ကူသည့် အခါမျိုးသည် ဖြစ်လာလိမ့်ဦးမည်၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသော အခါ၌ကား လူတို့သည် ဝပြောရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ ချဉ်းကပ်ကြကုန်၏၊ ထိုအရပ်၌ အပေါင်း အ ဖော်တို့နှင့် နေရ၏၊ ရောပြွမ်း၍ နေရ၏၊ အပေါင်းအဖော်တို့နှင့် နေရခြင်း ရောပြွမ်း ၍ နေရခြင်းဖြစ်ခဲ့သော် ဘုရားသျှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ကို နှလုံးသွင်းရန် မလွယ် ကူ၊ အစွန်အဖျား ကျသော တောကျောင်းတို့ကို မှီဝဲရန် မလွယ်ကူ၊ အလိုမရှိအပ် မနှစ်သက်အပ် မမြတ်နိုးအပ်သော ထို(ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း) သဘောသည် ငါ့ထံ သို့ မရောက်လာမီ ငါသည် မရောက်သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် ယခုစောစောကပင် လုံ့လကို အားထုတ်တော့မည်၊ ငါသည် ယင်း(ဈာန်မဂ်ဖိုလ်) တရားနှင့် ပြည့်စုံပါမူ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးသော အခါ၌လည်း ချမ်းသာစွာ နေရပေလိမ့်မည်'' ဟု (ဆင်ခြင်၏)။
ရဟန်းတို့ ဤတတိယ အနာဂတ်ဘေးကို ကောင်းစွာ မြင်သော ရဟန်းသည် မရောက်သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် မမေ့မလျော့ ပြင်းစွာ အားထုတ်သော လုံ့လဖြင့် (နိဗ္ဗာန်)သို့ စေလွှတ်အပ်သော စိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍ နေခြင်းငှါ သင့်လျော်သည် သာလျှင်တည်း။
Posted by U Lawkanartha at 3/25/2009 02:42:00 PM Links to this post
''ယခုအခါ၌ လူတို့သည် ညီညွတ်ကုန်၏၊ ဝမ်းမြောက်ကြကုန်၏၊ ခိုက်ရန်ငြင်းခုံခြင်း မရှိကြကုန်ဘဲ နို့နှင့်ရေ ရောနှောသကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်၏၊ အချင်းချင်း ချစ်ခင်သော မျက်စိတို့ဖြင့် ကြည့်၍ နေထိုင်ကုန်၏၊ တောပုန်းဓားပြတို့ ထကြွ သောင်းကျန်း သည်ဖြစ်၍ ဇနပုဒ်နေသူတို့သည် လှည်း ရထားယာဉ်တို့ကို တက်စီးကုန်လျက် ပြေးလွှားကြရသည့် ဘေးရန်ဖြစ်သော အခါမျိုးသည် ဖြစ်လာလိမ့်ဦးမည်၊ ဘေးဖြစ်
လာသည် ရှိသော် လူတို့သည် အေးချမ်းရာ အရပ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ချဉ်းကပ်ကြ ကုန်၏၊ ထိုအရပ်၌ အပေါင်းအဖော်တို့နှင့် နေရ၏၊ ရောပြွမ်း၍ နေရ၏၊ အပေါင်း အဖော်တို့နှင့် နေရခြင်း ရောပြွမ်း၍ နေရခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် ဘုရားသျှင်တို့၏ အဆုံး အမတော်ကို နှလုံးသွင်းရန် မလွယ်ကူ၊ အစွန်အဖျားကျသော တောကျောင်းတို့ကို မှီဝဲရန် မလွယ်ကူ၊ အလိုမရှိအပ် မနှစ်သက်အပ် မမြတ်နိုးအပ်သော ထို (မြို့ရွာ သောင်းကျန်းမှု) သဘောတရားသည် ငါ့ထံသို့ မရောက်လာမီ ငါသည် မရောက် သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်) သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် ယခုစောစောကပင် လုံ့လကို အားထုတ်တော့မည်၊ ငါသည် ယင်း (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်) တရားနှင့် ပြည့်စုံ သည် ရှိသော် (သောင်းကျန်းမှု) ဘေး ဖြစ်ပေါ်လာသော်လည်း ချမ်းသာစွာ နေရ ပေလိမ့်မည်'' ဟု (ဆင်ခြင်၏)။
ရဟန်းတို့ ဤစတုတ္ထအနာဂတ်ဘေးကို ကောင်းစွာမြင်သောရဟန်းသည် မရောက် သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် မမေ့မလျော့ ပြင်းစွာ အားထုတ်သော လုံ့လဖြင့် (နိဗ္ဗာန်)သို့စေလွှတ်အပ်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ နေခြင်းငှါ သင့်လျော်သည် သာလျှင်တည်း။
Posted by U Lawkanartha at 3/25/2009 02:41:00 PM Links to this post
''ယခုအခါ၌ကား သံဃာသည် ညီညွတ်၏၊ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ရှိသည်ဖြစ်၍ ခိုက်ရန်ငြင်းခုံခြင်း မရှိဘဲ ပါတိမောက် အတူပြလျက် ချမ်းသာစွာ နေ၏၊ သံဃာ ကွဲပြားသော အခါသည် ဖြစ်လာလိမ့်ဦးမည်၊ သံဃာ ကွဲပြားသည်ရှိသော် ဘုရား သျှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ကို နှလုံးသွင်းရန် မလွယ်ကူ၊ အစွန်အဖျားကျသော တောကျောင်းတို့ကို မှီဝဲရန် မလွယ်ကူ၊ အလိုမရှိအပ် မနှစ်သက်အပ် မမြတ်နိုးအပ် သော (သံဃာကွဲပြားမှု) သဘောတရားသည် ငါ့ထံသို့ မရောက်လာမီ ငါသည် မရောက်သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် ယခု စောစော ကပင် လုံ့လကို အားထုတ်တော့မည်၊ ငါသည် ယင်း (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်) တရားနှင့် ပြည့်စုံသည်ရှိသော် သံဃာ ကွဲပြားသော်လည်း ချမ်းသာစွာ နေရပေလိမ့်မည်'' ဟု (ဆင်ခြင်၏)။
ရဟန်းတို့ ဤပဉ္စမ အနာဂတ်ဘေးကို ကောင်းစွာ မြင်သော ရဟန်းသည် မရောက် သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်) သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် မမေ့မလျော့ ပြင်းစွာ အားထုတ်သော လုံ့လဖြင့်(နိဗ္ဗာန်)သို့ စေလွှတ်အပ်သောစိတ် ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ ခြင်းငှါ သင့်လျော်သည်သာလျှင်တည်း။
ရဟန်းတို့ ဤအနာဂတ်ဘေး ငါးမျိုးတို့ကို ကောင်းစွာမြင်သော ရဟန်းသည် မရောက်သေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)သို့ ရောက်ရန် မရသေးသည့် (ဈာန်မဂ်ဖိုလ်)ကို ရရန် မျက်မှောက် မပြုရသေးသည့် (နိဗ္ဗာန်)ကို မျက်မှောက်ပြုရန် မမေ့မလျော့ ပြင်းစွာ အားထုတ်သော လုံ့လဖြင့် (နိဗ္ဗာန်)သို့ စေလွှတ်အပ်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ် ၍ နေခြင်းငှါ သင့်လျော်သည် သာလျှင်တည်း ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
Posted by U Lawkanartha at 3/25/2009 02:38:00 PM Links to this post
ရဟန်းတို့ ဥစ္စာတို့သည် ဤငါးမျိုးတို့တည်း
သဒ္ဓါဥစ္စာ၊ သီလဥစ္စာ၊ သုတဥစ္စာ၊ စာဂဥစ္စာ၊ ပညာဥစ္စာတို့တည်း။
သဒ္ဓါဥစ္စာ ဟူသည် ...
ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်၌ အရိယာတပည့်သည် သဒ္ဓါတရားရှိ၏၊ မြတ်စွာ ဘုရား၏ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်နှင့် သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကို ယုံကြည်၏။ ''ထိုမြတ်စွာ ဘုရားသည်။ပ။ နတ်လူတို့၏ ဆရာဖြစ်တော်မူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း သတ္ထာ ဒေဝမနုဿာနံ မည်တော်မူ၏၊ (သစ္စာလေးပါးကို) သိစေတော်မူသော အ ကြောင်းကြောင့်လည်း ဗုဒ္ဓမည်တော်မူ၏၊ ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးတော်မူသော အ ကြောင်းကြောင့်လည်း ဘဂဝါ မည်တော်မူ၏'' ဟုယုံကြည်၏။
ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို သဒ္ဓါဥစ္စာ ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။
သီလဥစ္စာ ဟူသည် ...
ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်၌ အရိယာတပည့်သည် သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ပ။ မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော သေရည်သေရက်ကို သောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။
ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို သီလဥစ္စာဟူ၍ ဆိုအပ်၏။
သုတဥစ္စာ ဟူသည် ...
ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်၌ အရိယာတပည့်သည် အကြားအမြင် များ၏။ပ။
အကြားအမြင် (ပညာ) ဖြင့် ကောင်းစွာ ထိုးထွင်း၍ သိ၏။
ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို သုတဥစ္စာ ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။
စာဂဥစ္စာ ဟူသည် ...
ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်၌ အရိယာတပည့်သည် ဝန်တိုမှု အညစ်အကြေး ကင်းသော စိတ်ဖြင့် အိမ်၌နေ၏၊ လွတ်လွတ်စွန့်ကြဲ၏၊ ဆေးကြောပြီးသော လက် ရှိ၏၊ စွန့်ကြဲမှု၌ မွေ့လျော်၏၊ အတောင်းခံရန် အသင့်ဖြစ်၏၊ ပေးကမ်းမှု ခွဲဝေမှု၌ မွေ့လျော်၏။
ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို စာဂဥစ္စာ ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။
ပညာဥစ္စာ ဟူသည် ...
ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်၌ အရိယာတပည့်သည် ပညာရှိ၏၊ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း ကို သိသော၊ ကိလေသာတို့ကို ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးနိုင်သော၊ ဆင်းရဲမှုကုန်ရာ နိဗ္ဗာန် သို့ ကောင်းစွာ ရောက်စေနိုင်သော မြတ်သော ပညာနှင့် ပြည့်စုံ၏။
ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို ပညာဥစ္စာ ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။
ရဟန်းတို့ ဥစ္စာတို့သည် ဤငါးမျိုးတို့တည်း ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
အကြင်သူ၏ ယုံကြည်မှု (သဒ္ဓါ) သည် မြတ်စွာဘုရား၌ မတုန်မလှုပ် ကောင်းမွန်စွာ တည်၏၊ အကြင်သူ၏ သီလသည် ကောင်းမြတ်၏၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ နှစ်သက် အပ်၏၊ ချီးမွမ်းအပ်သည်လည်း ဖြစ်၏။ အကြင်သူအား သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း သည် လည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်သည် ဖြစ်၍ ဖြစ်သော ဉာဏ်အမြင်သည် လည်းကောင်း ရှိ၏။ ထိုသူကို မဆင်းရဲသော သူဟူ၍ ဆိုကုန်၏၊ ထိုသူ၏ အသက် ရှင်ခြင်းကား အချည်းအနှီး မဟုတ်ချေ။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသျှင်တို့၏ အဆုံးအမတော်ကို အောက်မေ့သော ပညာရှိသည် သဒ္ဓါကို လည်းကောင်း၊ သီလကို လည်းကောင်း၊ ကြည်ညိုခြင်းကို လည်းကောင်း၊ တရားသိမြင်ခြင်းကို လည်းကောင်း အဖန်ဖန် အားထုတ်ရာသတည်း။၄၇
၇ - ဓနသုတ်၊ မုဏ္ဍရာဇ၀ဂ်၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/25/2009 01:05:00 PM Links to this post
''ရဟန်း'' ဟူသည်ကား ...
၂ - သုတ္တန္တဘာဇနီယနည်း (အကျယ်-မှ)
ရဟန်းဟု ခေါ်ဝေါ် ပညတ်ခြင်းကြောင့် ရဟန်း၊
ရဟန်းဟု ဝန်ခံခြင်းကြောင့် ရဟန်း၊
ဆွမ်းခံစားလေ့ရှိသော သဘောကြောင့် ရဟန်း၊
ဆွမ်းခံအကျင့်သို့ ကပ်ရောက်တတ်သောကြောင့် ရဟန်း၊
အပိုင်းပိုင်းပြတ်သော အဝတ်ကို ချုပ်စပ်၍ ဝတ်တတ်သောကြောင့် ရဟန်း၊
အကုသိုလ် အယုတ်တရားတို့ကို ဖျက်ဆီးတတ်သောကြောင့် ရဟန်း၊
အကုသိုလ် အယုတ်တရားတို့ကို ဖျက်ဆီးပြီးသောကြောင့် ရဟန်း၊
အဆင့်ဆင့်အားဖြင့် ကိလေသာတို့ကို ပယ်တတ်သောကြောင့် ရဟန်း၊
တစ်ပြိုင်နက်အားဖြင့် ကိလေသာတို့ကို ပယ်တတ်သောကြောင့် ရဟန်း၊
ကျင့်ဆဲကျင့်ပြီး မဟုတ်သော ရဟန်း၊
ညီညွတ်သော သံဃာသည် ပြုအပ်သော, မြတ်စွာဘုရား သာသနာအား ထိုက် သော, မပျက်သော ဉတ်လျှင် လေးကြိမ်မြောက်ရှိသော 'ဉတ္တိစတုတ္ထ'ကံနှင့် ပြည့်စုံ သော ရဟန်းတည်း။ ၅၁၀
ရဟန်း ဟူသည်ကား ဈာနဝိဘင်္ဂ၊ ၀ိဘင်းပါဠိတော်၊ အဘိဓမ္မာပိဋက။
Posted by U Lawkanartha at 3/24/2009 05:12:00 PM Links to this post
ဝိတက္ကသုတ်- (ကြံစည်ခြင်း) ၀ိတက် ၃-မျိုး...
ဤဒေသနာကို ဘုန်းတော်ကြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောတော်မူ၏၊ ပူဇော် အထူးကိုခံတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏ဟု အကျွန်ုပ် ကြားနာ ခဲ့ရပါသည်-
အကုသိုလ်နှင့် စပ်ယှဉ်သော ကြံစည်မှု 'ဝိတက်' တို့သည် ဤသုံးပါးတို့တည်း။
သူတစ်ပါးတို့က မထီမဲ့မြင် မပြုခြင်းနှင့် စပ်ယှဉ်သော ကြံစည်မှု 'ဝိတက်'၊
လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော်အစောနှင့် စပ်ယှဉ်သော ကြံစည်မှု 'ဝိတက်'၊
သူတစ်ပါးတို့၌ ချစ်ခင်မှု 'ဂေဟဿိတပေမ' နှင့် စပ်ယှဉ်သော ကြံစည်မှု 'ဝိတက်'
အကုသိုလ်နှင့်စပ်ယှဉ်သော ကြံစည်မှု 'ဝိတက်' တို့သည် ဤသုံးပါးတို့တည်း၊
''သူတစ်ပါးတို့က မထီမဲ့မြင် မပြုခြင်းနှင့် စပ်ယှဉ်သူ၊ လာဘ်ပူဇော်သကာ အကျော် အစော၌ လေးစားသူ၊ ချစ်ကျွမ်းဝင်သူတို့နှင့် တကွ (ဂေဟဿိတပေမဖြင့်) နှစ် သက် ဝမ်းမြောက်လေ့ရှိသူသည် သံယောဇဉ် ကုန်ခန်းရန် ဝေးကွာလှ၏။
အကြင်သူသည်ကား သားသမီး ကျွဲနွားကို လည်းကောင်း၊ ထိမ်းမြားခြင်းအမှုတို့ကို လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်း ပရိက္ခရာ သိမ်းဆည်းမှုတို့ကို လည်းကောင်း ပယ်စွန့်၍ ရှင်ရဟန်းပြု၏၊ ထိုသို့ သဘောရှိသော ထိုရဟန်းသည် မြတ်သော အရဟတ္တဖိုလ် သို့ ရောက်ခြင်းငှါ ထိုက်၏'' ဟု ဤဂါထာဖြင့် ဆိုအပ်၏။
၁ - ဝိတက္ကသုတ်၊ စတုတ္ထ၀ဂ်၊ ဣတိဝုတ်ပါဠိတော်။ ခုဒ္ဒကနိကာယ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/24/2009 05:02:00 PM Links to this post
သာသနာပ ပရိဗိုဇ်တို့အား မေးရန် ၁၀-ချက်...
ပဌမ မဟာပဥှာသုတ် -မှ ...
တစ်ခုသောနေရာ၌ ထိုင်ကုန်သော ထိုရဟန်းတို့အား ...
သာသနာတော်မှ တစ်ပါးသော အယူရှိကြသည့် ပရိဗိုဇ်တို့သည်
ဤသို့ ပြောဆိုကုန်၏ -
ငါ့သျှင်တို့ ရဟန်းဂေါတမသည် သာဝကတို့အား ''ရဟန်းတို့ သင်တို့လာကုန်လော့၊ တရား အားလုံးကို သိကုန်လော့၊ တရားအားလုံးကို သိ၍ နေကုန်လော့''ဟု ဤသို့ တရားဟော၏။
ငါ့သျှင်တို့ ငါတို့သည်လည်း သာဝကတို့အား ''ငါ့သျှင်တို့ သင်တို့ လာကုန်လော့၊ တရားအားလုံးကို သိကုန်လော့၊ တရားအားလုံးကို သိ၍ နေကုန်လော့'' ဟု ဤသို့ တရားကို ဟောကုန်၏။
ငါ့သျှင်တို့ ဤငါတို့ တရားဟောရာ၌ ရဟန်းဂေါတမနှင့် ငါတို့၏ တရား ဟောပုံချင်း ဆုံးမပုံချင်း အဘယ်သို့ ထူးသနည်း၊ အဘယ်သို့ပိုလွန်သနည်း အဘယ်သို့ ခြားနား သနည်း (ဟုပြောဆိုကြကုန်၏)။
ထိုအခါ ထိုရဟန်းတို့သည် ထိုသာသနာတော်မှ တစ်ပါးသော အယူရှိကြသည့် ပရိဗိုဇ်တို့၏ စကားကို မနှစ်သက်ကုန် မတားမြစ်ကုန်၊ မနှစ်သက်ကုန် မတားမြစ် ကုန်ဘဲ နေရာမှထကာ ...
''မြတ်စွာဘုရား၏အထံ၌ ထိုစကား၏ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို သိရကုန်အံ့''
တစ်ပါးသော အယူရှိကြသည့် ပရိဗိုဇ်တို့ကို ဤသို့ ပြောဆို မေးမြန်းကုန်ရာ၏၊
ပြဿနာနှစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်နှစ်ခု ဖြေဆိုချက်နှစ်ခု၊
ပြဿနာသုံးခု ရည်ညွှန်းချက်သုံးခု ဖြေဆိုချက်သုံးခု၊
ပြဿနာလေးခု ရည်ညွှန်းချက်လေးခု ဖြေဆိုချက်လေးခု၊
ပြဿနာငါးခု ရည်ညွှန်းချက်ငါးခု ဖြေဆိုချက်ငါးခု၊
ပြဿနာခြောက်ခု ရည်ညွှန်းချက်ခြောက်ခု ဖြေဆိုချက်ခြောက်ခု၊
ပြဿနာခုနစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်ခုနစ်ခု ဖြေဆိုချက်ခုနစ်ခု၊
ပြဿနာရှစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်ရှစ်ခု ဖြေဆိုချက်ရှစ်ခု၊
ပြဿနာကိုးခု ရည်ညွှန်းချက်ကိုးခု ဖြေဆိုချက်ကိုးခု၊
ပြဿနာဆယ်ခု ရည်ညွှန်းချက်ဆယ်ခု ဖြေဆိုချက်ဆယ်ခု'' ဟု
ဤသို့ ပြောဆို မေးမြန်းကုန်ရာ၏။
သာသနာတော်မှ တစ်ပါးသော အယူရှိကြသည့် ပရိဗိုဇ်တို့သည် ဤသို့ အမေးခံကြ ရသည်ရှိသော် ကျကျနန ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြေဆိုနိုင်ကြလိမ့်မည် မဟုတ်ကုန်၊ အလွန် ပင်ပန်းခြင်းသို့လည်း ရောက်ကြကုန်လိမ့်မည်၊ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ် ကြောင့်နည်း၊ ရဟန်းတို့ အရာ မဟုတ်သောကြောင့်တည်း။
နတ် မာရ်နတ် ဗြဟ္မာနှင့်တကွသော နတ်လောကနှင့် သမဏဗြာဟ္မဏ မင်းများ လူများနှင့်တကွသော လူလောက၌ မြတ်စွာဘုရားကို လည်းကောင်း၊ မြတ်စွာ ဘုရား၏ တပည့်ကို လည်းကောင်း ဤသာသနာတော်မှ ကြားနာရ၍ (ပြောဆိုသူ ကိုလည်းကောင်း) ကြဉ်ထား၍ ဤပြဿနာတို့ကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် စိတ်ကို နှစ်သိမ့် စေနိုင်မည့် အခြားသူကို ငါမမြင်။
''ပြဿနာတစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခု ဖြေဆိုချက်တစ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကား ကို အဘယ်ကိုစွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားတစ်ခု၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်းကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက် သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။
သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် အာဟာရလျှင် တည်ရာရှိကုန်၏။
ရဟန်းတို့ ဤ(အာဟာရ) တရားတစ်ခု၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်းကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ရှိသည် ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာတစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခု ဖြေဆိုချက်တစ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို ဤသည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏။
''ပြဿနာနှစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်နှစ်ခု ဖြေဆိုချက်နှစ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို အဘယ်ကိုစွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားနှစ်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်း စွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံးအပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်း စွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။
ရဟန်းတို့ ဤ (ရုပ်၊ နာမ်) တရားနှစ်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ ကောင်းစွာ အနက်သဘောကို သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာနှစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်နှစ်ခု ဖြေဆိုချက်နှစ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို ဤသည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏။
''ပြဿနာသုံးခု ရည်ညွှန်းချက်သုံးခု ဖြေဆိုချက်သုံးခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို အဘယ်ကိုစွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားသုံးမျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်း စွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်းကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံးအပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ ကောင်းစွာ အနက်သဘော ကို သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။
ရဟန်းတို့ ဤ (ဝေဒနာ) တရားသုံးမျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်း အခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာသုံးခု ရည်ညွှန်းချက်သုံးခု ဖြေဆိုချက်သုံးခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို ဤသည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏။
''ပြဿနာလေးခု ရည်ညွှန်းချက်လေးခု ဖြေဆိုချက်လေးခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထို စကားကို အဘယ်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားလေးမျိုးတို့၌ ရဟန်း သည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်းကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ် မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံးအပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက် သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကိုပြု၏။
အဘယ် တရားလေးမျိုးတို့နည်း ...
ရဟန်းတို့ ဤ(အာဟာရ)တရားလေးမျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာလေးခု ရည်ညွှန်းချက်လေးခု ဖြေဆိုချက်လေးခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို ဤသည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏။
''ပြဿနာငါးခု ရည်ညွှန်းချက်ငါးခု ဖြေဆိုချက်ငါးခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို အဘယ်ကိုစွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားငါးမျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်း စွာငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်းကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံးအပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်း စွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခ အဆုံးကို ပြု၏။
ရဟန်းတို့ ဤ (ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ) တရား ငါးမျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့ သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီး လျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခ အဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာငါးခု ရည်ညွှန်းချက် ငါးခု ဖြေဆိုချက်ငါးခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို ဤသည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏။
''ပြဿနာခြောက်ခု ရည်ညွှန်းချက်ခြောက်ခု ဖြေဆိုချက်ခြောက်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို အဘယ်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားခြောက်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံးအပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက် သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။
အတွင်း 'အဇ္ဈတ္တိက' အာယတန ခြောက်မျိုးတို့ တည်း။
ရဟန်းတို့ ဤ (အဇ္ဈတ္တိကအာယတန) တရားခြောက်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်း စွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာတပ်ခြင်းကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာသိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာ ခြောက်ခု ရည်ညွှန်းချက် ခြောက်ခု ဖြေဆိုချက်ခြောက်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကား ကို ဤသည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏။
''ပြဿနာခုနစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်ခုနစ်ခု ဖြေဆိုချက်ခုနစ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို အဘယ်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားခုနစ်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခ အဆုံးကိုပြု၏။
ဝိညာဏ်၏ တည်ရာ 'ဝိညာဏဋ္ဌိတိ' ခုနစ်မျိုးတို့တည်း။
ရဟန်းတို့ ဤ (ဝိညာဏဋ္ဌိတိ)တရားခုနစ်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့ သည် ကောင်းစွာတပ်ခြင်းကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာခုနစ်ခု ရည်ညွှန်း ချက် ခုနစ်ခု ဖြေဆိုချက် ခုနစ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို ဤသည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏။
''ပြဿနာရှစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်ရှစ်ခု ဖြေဆိုချက်ရှစ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို အဘယ်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားရှစ်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်းကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက် သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။
ရဟန်းတို့ ဤ(လောကဓံ)တရားရှစ်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခ အဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာရှစ်ခု ရည်ညွှန်းချက်ရှစ်ခု ဖြေဆိုချက်ရှစ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို ဤသည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏။
''ပြဿနာကိုးခု ရည်ညွှန်းချက်ကိုးခု ဖြေဆိုချက်ကိုးခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို အဘယ်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားကိုးမျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်းကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက် သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည် ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။
သတ္တဝါတို့၏ တည်ရာ 'သတ္တာဝါသ' ကိုးမျိုးတို့တည်း။
ရဟန်းတို့ ဤ(သတ္တာဝါသ) တရားကိုးမျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့ သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီး လျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာကိုးခု ရည်ညွှန်းချက် ကိုးခု ဖြေဆိုချက်ကိုးခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော စကားကို ဤသည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏။
''ပြဿနာဆယ်ခု ရည်ညွှန်းချက်ဆယ်ခု ဖြေဆိုချက်ဆယ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို အဘယ်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်သနည်း။ ရဟန်းတို့ တရားဆယ်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာသိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။
ရဟန်းတို့ ဤ(အကုသလကမ္မပထ) တရားဆယ်မျိုးတို့၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ငြီးငွေ့သည် ကောင်းစွာ တပ်ခြင်း ကင်းသည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သည် ကောင်းစွာ အဆုံး အပိုင်းအခြားကို ရှုလေ့ ရှိသည်ဖြစ်၍ အနက်သဘောကို ကောင်းစွာ သိပြီးလျှင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဒုက္ခအဆုံးကို ပြု၏။ ''ပြဿနာ ဆယ်ခု ရည်ညွှန်းချက်ဆယ်ခု ဖြေဆိုချက်ဆယ်ခု'' ဟု ဆိုခဲ့သော ထိုစကားကို ဤ သည်ကို စွဲ၍ ဆိုအပ်၏ ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ ၂၇
၇ - ပဌမ မဟာပဥှာသုတ်-မှ၊ မဟာဝဂ်၊ န၀ကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တိုရ်။
Posted by U Lawkanartha at 3/24/2009 04:48:00 PM Links to this post
သုပ္ပဝါသာသုတ်- မချစ်ခင်အပ်သော သဘောတရားသည်...
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ကုဏ္ဍိကာမြို့ ကုဏ္ဍဓာနတော၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး ကိုယ်ဝန် ဆောင်ရ၏။ ခုနစ်ရက် ပတ်လုံး ကိုယ်ဝန်ကြောင့် မိန်းမော တွေဝေရ၏။ ထိုသုပ္ပဝါသာမင်းသမီးသည် ထက်မြက်ကြမ်းကြုတ် စပ်ရှားကုန်သော ဆင်းရဲဝေဒ နာတို့ဖြင့် တွေ့ထိသည်ရှိသော် ''အကြင် မြတ်စွာဘုရားသည် ဤသို့ သဘောရှိ သော ဆင်းရဲကို ပယ်ခြင်းငှါ တရားဟော၏။
ထိုမြတ်စွာဘုရားသည် ကိုယ်တော်တိုင် သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူပေ စွတကား၊ အကြင် သံဃာတော်သည် ဤသို့ သဘောရှိသော ဆင်းရဲကို ပယ်ခြင်း ငှါ ကောင်းစွာ ကျင့်တော်မူ၏။
ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ တပည့် သံဃာတော်သည် ကောင်းစွာ ကျင့်တော်မူပေစွ တကား၊ အကြင်နိဗ္ဗာန်၌ ဤသို့ သဘောရှိသော ဆင်းရဲမရှိ၊ ထိုနိဗ္ဗာန်သည် အလွန် ချမ်းသာလေစွတကား'' ဟု ဤသုံးပါးသော ကြံစည်ခြင်းတို့ဖြင့် သည်းခံ၏။
ထို့နောက် ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခင်ပွန်းသည်ကို ခေါ်၍ ''အရှင့် သား သင်သည် လာပါလော့၊ မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ ကျွန်မ၏ စကားဖြင့် မြတ်စွာဘုရား၏ ခြေတော်တို့ကို ဦးခေါင်းဖြင့် ရှိခိုးပါလော့၊ အနာရောဂါ ကင်းရှင်း ခြင်း ဆင်းရဲကင်းခြင်း လျင်စွာ ထနိုင်ခြင်း ခွန်အားရှိခြင်း ချမ်းသာစွာ နေရခြင်းကို မေးလျှောက်ပါ ချေလော့။ 'အသျှင်ဘုရား ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် မြတ်စွာဘုရား၏ ခြေတော်တို့ကို ဦးခေါင်းဖြင့် ရှိခိုးပါ၏။ အနာရောဂါ ကင်းရှင်းခြင်း ဆင်းရဲကင်းခြင်း လျင်စွာထနိုင်ခြင်း ခွန်အားရှိခြင်း ချမ်းသာစွာ နေရခြင်းကို မေး လျှောက်လိုက်ပါ၏' ဟု လျှောက်ပါလော့။
အသျှင်ဘုရား ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး ကိုယ်ဝန်ကို
ဆောင်ရ၏။ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ကိုယ်ဝန်ကြောင့် မိန်းမောတွေဝေရ၏။ သုပ္ပဝါသာ မင်းသမီးသည် ထက်မြက်ကြမ်းကြုတ် စပ်ရှားကုန်သော ဆင်းရဲဝေဒနာတို့ဖြင့် တွေ့ထိသောအခါ အကြင် မြတ်စွာဘုရားသည် ဤသို့ သဘောရှိသော ဆင်းရဲကို ပယ်ခြင်းငှါ တရားဟော၏။ ထိုမြတ်စွာဘုရားသည် ကိုယ်တော်တိုင် သစ္စာလေးပါး ကို ထိုးထွင်း၍ သိတော်မူပေစွတကား။ အကြင် သံဃာတော်သည် ဤသို့ သဘော ရှိသော ဆင်းရဲကို ပယ်ခြင်းငှါ ကောင်းစွာ ကျင့်တော်မူ၏။ ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ တပည့် သံဃာတော်သည် ကောင်းစွာ ကျင့်တော်မူပေစွတကား။ အကြင် နိဗ္ဗာန်၌ ဤသို့ သဘောရှိသော ဆင်းရဲမရှိ၊ ထိုနိဗ္ဗာန်သည် အလွန်ချမ်းသာလေစွတကား' ဟု ဤသုံးပါးသောကြံစည်ခြင်းတို့ဖြင့် သည်းခံ၏ဟု ဤသို့လည်း လျှောက်ပါလော့ ဟု ဆို၏။
ထိုကောလိယမင်းသားသည် ''ကောင်းပြီ'' ဟု ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာ၏ (စကားကို) ဝန်ခံ၍ မြတ်စွာဘုရား ထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတစ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးလျက် တစ်ခုသောအရပ်၌ ထိုင်ကာ မြတ်စွာဘုရားအား ဤစကားကို လျှောက် ၏ ''အသျှင်ဘုရား ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည်..။ ပ ။ ဤသို့လည်း လျှောက်လိုက်ပါ၏'' ဟု (လျှောက်၏)။
''ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ရောဂါမရှိမူ၍ ချမ်းသာစေသတည်း။ ရောဂါကင်းသောသားကို ဖွားစေသတည်း'' ဟု မိန့်တော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရား မိန့် ဆိုလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ရောဂါ မရှိမူ၍ ချမ်းသာစွာ ရောဂါကင်းသော သားကို ဖွားမြင်လေ၏။
''အသျှင်ဘုရား ကောင်းပါပြီ'' ဟု ထိုကောလိယမင်းသားသည် မြတ်စွာဘုရား၏ စကားကို နှစ်သက် ဝမ်းမြောက်၍ နေရာမှ ထလျက် မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုးပြီးလျှင် အရိုအသေပြုကာ မိမိအိမ်သို့ ပြန်သွားလေ၏။ ကောလိယမင်းသားသည် ရောဂါ ကင်းသော သားကိုဖွားမြင်ပြီးသော ရောဂါမရှိမူ၍ ချမ်းသာခြင်းရှိသော ကောလိယ မင်းသမီး သုပ္ပဝါသာကို မြင်၍ ကောလိယမင်းသားအား ဤသို့ အကြံဖြစ်၏ ''အချင်းတို့ မြတ်စွာဘုရား၏ ကြီးသောတန်ခိုး ကြီးသော အာနုဘော်ရှိသည်၏ အဖြစ်သည် အံ့ဖွယ်ရှိပေစွ၊ အချင်းတို့ မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်ပေစွ၊ မြတ်စွာဘုရား မိန့်ဆို လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဤကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ရောဂါ မရှိမူ၍ ချမ်းသာစွာ ရောဂါကင်းသော သားကိုဖွားမြင်၏''ဟု နှစ်လိုခြင်း ဝမ်းမြောက် ခြင်း နှစ်သက်ရွှင်လန်းခြင်း ဖြစ်လေ၏။
ထို့နောက် ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခင်ပွန်းသည်ကို ခေါ်၍ ''အရှင့် သား လာပါဦးလော့၊ မြတ်စွာဘုရား ထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ ကျွန်မ၏ စကားဖြင့် မြတ်စွာ ဘုရား၏ ခြေတော်တို့ကို ဦးခေါင်းဖြင့် ရှိခိုးပါလော့ 'အသျှင်ဘုရား ကောလိယ မင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် မြတ်စွာဘုရား၏ခြေတော်တို့ကို ဦးခေါင်းဖြင့် ရှိခိုးပါ၏'၊ 'အသျှင်ဘုရား ကောလိယ မင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး ကိုယ်ဝန် ကို ဆောင်ရ၏။ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ကိုယ်ဝန်ကြောင့် မိန်းမောတွေဝေရ၏။ သုပ္ပဝါသာမင်းသမီးသည် ရောဂါမရှိမူ၍ ချမ်းသာစွာ ရောဂါကင်းသော သားကို ဖွားမြင်ပါ၏။ သုပ္ပဝါသာမင်းသမီး သည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ဘုရားအမှူးရှိသော ရဟန်းသံဃာကို ဆွမ်းစားပင့်ဖိတ်ပါ၏။ အသျှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်း သံဃာနှင့် အတူတကွ ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာ၏ ဆွမ်းတို့ကို ခုနစ်ရက် ပတ်လုံး သည်းခံ သာယာတော်မူပါ' ဟု ဤသို့လည်း လျှောက်ထားလော့'' ဟု ပြောဆို၏။
ကောလိယမင်းသားသည် ''ကောင်းပြီ'' ဟု ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာ၏ စကားကို ဝန်ခံ၍ မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုး လျက် တစ်ခုသောအရပ်၌ ထိုင်ပြီးသော် မြတ်စွာဘုရားအား ဤစကားကို လျှောက် ၏။ အသျှင်ဘုရား ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ။ ပ ။ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး သည်းခံ သာယာတော်မူပါ'' ဟု ဤသို့လည်း လျှောက်လိုက်ပါ၏ဟု (ဤသို့ လျှောက်၏)။
ထိုအခါ တစ်ယောက်သော ဥပါသကာသည် ဘုရားအမှူးရှိသော ရဟန်းသံဃာကို နက်ဖြန် အလို့ငှါ ဆွမ်းစားပင့် ဖိတ်ထားပြီး ဖြစ်၏။ ထိုဥပါသကာသည်ကား အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်၏ အလုပ်အကျွေးဖြစ်၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်ကို ခေါ်၍ ''မောဂ္ဂလ္လာန် လာဦးလော့၊ ဥပါသကာထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် ထိုဥပါသကာကို ဤသို့ ပြောဆိုလော့ 'ဥပါသကာ ကောလိယ မင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး ကိုယ်ဝန်ကို ဆောင်ရ၏။ ခုနစ်ရက် ပတ်လုံး ကိုယ်ဝန်ကြောင့် မိန်းမော တွေဝေရ၏။ သုပ္ပဝါသာမင်းသမီးသည် ယခုအခါ ရောဂါမရှိမူ၍ ချမ်းသာစွာ ရောဂါကင်းသောသားကို ဖွားမြင်၏။ သုပ္ပဝါ သာ မင်းသမီးသည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ဘုရားအမှူးရှိသော ရဟန်းသံဃာကို ဆွမ်း စားပင့်ဖိတ်၏။ ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ဆွမ်း ကျွေးပါစေ၊ သင်ကား နောက်မှကျွေးပါ' ဟု ပြောချေလော့၊ ဤဥပါသကာသည် သင်၏ အလုပ်အကျွေးတည်း'' ဟု မိန့်တော်မူ၏။
''အသျှင်ဘုရား ကောင်းပါပြီ'' ဟု အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်သည် မြတ်စွာဘုရား၏ စကားကို ဝန်ခံ၍ ဥပါသကာထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် ထိုဥပါသကာကို ဤသို့ မိန့်ဆို၏။ ပ ။ ဟု ဤသို့ (မိန့်ဆို၏)။
အသျှင်ဘုရား အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်သည် တပည့်တော်၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာကို လည်းကောင်း၊ အသက်ကိုလည်းကောင်း၊ သဒ္ဓါတရားကိုလည်းကောင်း ဤသုံးပါး သော တရားတို့ကို အာမခံနိုင်ပါမူ ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခုနစ် ရက်ပတ်လုံး ဆွမ်းကျွေးပါစေ၊ တပည့်တော်ကား နောက်မှ ကျွေးပါမည်ဟု (လျှောက်၏)။
ဥပါသကာ ထိုတရားသုံးပါး တို့တွင် စည်းစိမ်ဥစ္စာကို လည်းကောင်း၊ အသက်ကို လည်းကောင်း ဤနှစ်ပါးသော တရားတို့ကို ငါ အာမခံနိုင်၏။ သဒ္ဓါ တရားကိုမူကား သင်သည်ပင်လျှင် အာမခံလော့ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
အသျှင်ဘုရား အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်သည် တပည့်တော်၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာကို လည်းကောင်း အသက်ကိုလည်းကောင်း တရားနှစ်ပါးကို အာမခံနိုင်ပါမူ ကောလိ ယ မင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ဆွမ်းကျွေးပါစေ၊ တပည့်တော်က နောက်မှ ကျွေးပါမည်ဟု (လျှောက်၏)။
ထိုအခါ အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်သည် ထိုဥပါသကာကို သိစေပြီး၍ မြတ်စွာဘုရား ထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားအား ''အသျှင်ဘုရား တပည့်တော်သည် ထိုဥပါသကာကို အသိပေးခဲ့ပါပြီ။ ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခုနစ် ရက်ပတ်လုံး ဆွမ်းကျွေးပါစေ၊ ထိုဥပါသကာသည် နောက်မှကျွေးပါလိမ့်မည်'' ဟု လျှောက်၏။
ထိုအခါ ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး ဘုရားအမှူးရှိ သော ရဟန်းသံဃာကို မွန်မြတ်သော ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်ဖြင့် ရောင့်ရဲတင်းတိမ်သည့် တိုင်အောင် တားမြစ်သည့် တိုင်အောင် မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်ကျွေး၏။ ထိုသူငယ် ကိုလည်း မြတ်စွာဘုရားနှင့် ရဟန်းသံဃာ အားလုံးကို ရှိခိုးစေ၏။
ထိုအခါ အသျှင်သာရိပုတြာသည် ထိုသူငယ်ကို ...
''သူငယ် သင့်အား ခန့်ကျန်း၏လော၊ မျှတ၏လော၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ ကင်းပါ၏လော'' ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ အသျှင်ဘုရားသာရိပုတြာ တပည့်တော်အား အဘယ်မှာ ခန့် ကျန်းပါအံ့နည်း။ မျှတပါအံ့နည်း။ တပည့်တော်သည် ခုနစ်နှစ်တို့ပတ်လုံး သွေးအိုင် ထဲ၌ နေခဲ့ရပါသည်ဟု (လျှောက်၏)။
ထိုအခါ ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာသည် ''ငါ၏ သားသည် တရားစစ်သူကြီး အသျှင်သာရိပုတြာနှင့် အတူတကွ ပြောဆို၏'' ဟု နှစ်လိုခြင်း ဝမ်းမြောက်ခြင်း နှစ်သက် ရွှင်လန်းခြင်း ဖြစ်လေ၏။
ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ကောလိယမင်းသမီး သုပ္ပဝါသာအား နှစ်လိုဝမ်း မြောက်ခြင်း နှစ်သက်ရွှင်လန်းခြင်း ဖြစ်သည်ကို သိသောကြောင့် ကောလိယ မင်းသမီး သုပ္ပဝါသာကို ''သုပ္ပဝါသာ သင်သည် ဤသားမှတစ်ပါး ဤသို့ သဘော ရှိသော သားမျိုးကို အလိုရှိသေးသလော'' ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်မသည် ဤသားမှတစ်ပါး ဤသို့ သဘောရှိကုန်သော
သားခုနစ်ယောက်တို့ကို အလိုရှိပါသေးသည်ဟု (လျှောက်၏)။
''မသာယာအပ်သော သဘောတရားသည် သာယာဖွယ်အသွင် သဘောဖြင့် လည်းကောင်း၊ မချစ်ခင်အပ်သော သဘောတရားသည် ချစ်ခင်ဖွယ် အသွင် သဘောဖြင့် လည်းကောင်း ဆင်းရဲသော သဘောတရားသည် ချမ်းသာဖွယ် အသွင် သဘောဖြင့် လည်းကောင်း မေ့လျော့နေသူကို လွှမ်းမိုးဖိစီး၏'' ဟု ဤ ဥဒါန်းကို ကျူးရင့်တော်မူ၏။ ၁၈
၈ - သုပ္ပဝါသာသုတ်၊ မုစလိန္ဒ၀ဂ်၊ ဥဒါန်းပါဠိတော်။
Posted by U Lawkanartha at 3/23/2009 05:48:00 PM Links to this post
စက္ကသုတ် သမ္ပတ္တိ (ပြည့်စုံခြင်း) ၃၁။ ရဟန်းတို့ ပြ...
ဝဋ်ဆင်းရဲမှ မလွတ်နိုင်သူနှင့် လွတ်နိုင်သူ...
အဘယ်တရားကို စွဲလမ်း၍ ...
နန္ဒသုတ်- (နှစ်သက်ခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်း)
ဘုရားအစစ်နှင့် ဘုရားမဟုတ်သူ ဟောသော သာသနာ ...
ဥပ္ပါဒသုတ် - (ဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း)
အဘိနန္ဒသုတ် - (အလွန်နှစ်သက်၏)
ပဌမ နာထသုတ် - (မှီခိုရာ-ကိုးကွယ်ရာ)
သက္ကာရသုတ်... ရဟန်းတို့ကို မြင်လျှင် ဆဲရေးကုန်၏......
ဒုတိယအဿာဒသုတ်... ရရှိခြင်း နဲ့ ၀န်ခံခြင်း ...
ကုမ္မသုတ် ... ကြိုးရှည်ရှည် တပ်ထားသော မှိန်း ...
အဝေးမှဆောင်၍ ပေးလှူခြင်းကို ခံထိုက်သည် ...
ဘုရားကို စွပ်စွဲသောသူ နှစ်ဦး...
ဘုရားကို စွပ်စွဲသောသူနှင့် မစွပ်စွဲသူ...
ပျက်စီးတတ်သောကြောင့် ''လောက'' ဟုခေါ်သည်...
တပည့်တို့ မပူပန်အပ်သော ဆရာ...
လက်နှစ်ဖက် ခြေနှစ်ဖက်နှင့် လည်ပင်းကို တုပ်နှောင်၍....
ဗိုလ်လေးပါး ... စွမ်းပကား... ဗလသုတ်...
စူဠသေဋ္ဌိပေတဝတ္ထု... ဒါနကို မပြုမိ ဝန်တိုခြင်းကြောင့်...
စူဠပန္ထကသုတ်- သေမင်း မမြင်ရာ...
ဧကပုတ္တကသုတ်- သား ကွယ်လွန်၍...
သီဟသုတ်- တရားကို လေးစားသောကြောင့်...
ဥပက္ကိလေသသုတ် - ရဟန်းတို့ ရွှေ၏ အညစ်အကြေး ၅-မျိုး......
တုရူဗြဟ္မသုတ်- ပါးစပ်၌ ဓားမကြီးပါလာသူ...
နာသေန္တိသုတ်- မာတုဂါမတို့၏ အား ၅-ပါး...
ကလျာဏီသုတ်- (ကောင်းခြင်းငါးရပ် ပြည့်စုံသည်)
သံယောဂသုတ်- မေထုန်နှင့် ယှဉ်မှု မယှဉ်မှုကိုပြခြင်း.....
ရဟန်းများ သွားသင့်သောနေရာ မသင့်သောနေရာ...
ပဌမ ဝလာဟကသုတ်- မိုးနှင့်တူသောလူလေးမျိုး...
ပုရိသသုတ်- မိမိအသီးသည် မိမိကို...
ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကြောင့် ခံစားရသောသူများ...
ပဌမ သမာဓိသုတ် - ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး
အဘယ် အရာဝတ္ထုကို အလိုရှိသနည်းဟု...
ပုဂ္ဂိုလ် ငါးမျိုး (ရှင်းလင်းချက်)
အံသြဖွယ်ရာ မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်ပုံအချက် -
ဘောဂသုတ်- စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့၏ အပြစ်နှင့်အကျိုး...
မှီဝဲအပ် ဆည်းကပ်အပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်...
အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရခြင်း၌ တောင့်တသော ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်...